* Light Of Myanmar *: ကြောက်မက်ဖွယ် ဆူနာမိလူသတ်မှုကြီး (သို့) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စစ်ရာဇ၀တ်မှု
* Light Of Myanmar *
ကြောက်မက်ဖွယ် ဆူနာမိလူသတ်မှုကြီး (သို့) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စစ်ရာဇ၀တ်မှု
စက်တင်ဘာအရေးအခင်းမှာ အမေရိကန်ဝင်လာဖို့ တောင်းဆိုကျသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တောသားနှစ်ယောက် အနေနဲ့ အမျိုးမျိုး ဖျောင်းဖျခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှကို ပြောမရပါ။ အမေရိကန် အစိုးရ သူ့ပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့တာ တကမ္ဘာလုံးအသိပဲ။ 9/11 တစ်ခုတည်းလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသတ်ဖြတ်မှုတွေ များစွာ ရှိပါတယ်။ ဗဟုသုတလဲမရှိ ။ ဦးနောက်လဲမရှိ ။ ဥာဏ်ကလဲမရှိ ။ ဒီထဲ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကလဲ မရှိကျဘူးဗျ။ ဦးနောက်မကောင်းလို့ ဒီမိုကရေစီရအောင် လက်တွေ့ကျကျ အကြံမပေးနိုင်ဘူးဆိုလဲ ထားလိုက်ပါ။ (အနည်းဆုံး တိုင်းပြည်အတွက် ဆူးညှောင့် ခလုတ်တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။) အမြှောက်ခံချင်ရုံသက်သက်နဲ့ အချိန်တွေကို မနှောမြောပဲ အတင်းပြောချင်ပြောပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူအသတ်ဆုံး အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလန်အစိုးရကို အဖေခေါ်တဲ့ အထိလုပ်တာတော့ တရားလွန်ပါတယ်။ အခုတင်ပြမယ့် ဆောင်းပါးကလဲ ၂၀၀၄မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမိဟာ သဘာဝ ကြောင့်မဟုတ်ပဲ အမေရိကန် လက်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆူနာမိကြောင့် လူပေါင်း ၅ သိန်းလောက် သေဆုံးပြီး တစ်သန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွာလုံးကျွတ်လဲ ပြောက်ကုန်ပါတယ်။ (တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ်ချစ်သော ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများကို စော်ကားသလို မဖြစ်အောင် “ဒီမိုကရေစီသမား” “ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒီဆိုတဲ့” စကားလုံးကို မသုံးတော့ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို အလေးပြုပါမယ်။ ကျနော်တို့ စကားအပြောအဆိုအတွက် တော့ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် အစွန်းရောက်တွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်တယ်ထင်ပါတယ်။ တခြားနည်းနဲ့ တိုက်ဖျက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ)
Conspiracy နဲ့ News ဘာကွာလဲ?
Conspiracy လို့ပြောလိုက်ရင် လူတွေက အထင်သေးကျပါတယ်။ အဲလိုအထင်သေးအောင် အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေက သတင်းဌာနတွေ အကူအညီနဲ့ ဆိုက်ဝါးလုပ်ထားလို့ပါ။ Conspiracy ဆိုတာ အထောက်အထား သက်သေတွေ ပေါ်မှာ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြီး အစိုးရဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လူသတ်မှုတွေကို ဖေါ်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Twintower ကြီး လေယဉ်ဆီမီးလောင်တဲ့ အပူရှိန် ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် တိုက်ကြီး ပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့ အစိုးရက ကြေငြာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေယာဉ်တိုက်ထားတဲ့ အပေါက်ကြီးကနေ မိန်းမတစ်ယောက် အောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ ဗီဒီယိုကို အခြေခံပြီး အစိုးရ လိမ်ညာကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ၄-၅ ပေ ထူတဲ့သံတောင် အရည်ပျော်အောင် ပူတယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောက်ကို စူးစမ်းပြီး ငုံ့ကြည့်နိုင်ပါ့မလား? ဒါဆိုရင် Conspiracy ဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံ သတင်းဌာနကြီးတွေ ဆိုက်ဝါး ရိုက်ထားသလို အစိုးရကို မရှိတဲ့ အပြစ်လိုက်ရှာနေတယ်လို့ ထင်သင့်ပါသလား?
Conspiracy ဆိုတာ ယူဆချက် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လူတန်းစားမျိုးစုံကလည်း ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားကျပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲမှာ Professor တွေရှိသလို အမှန်တရားချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သတင်းသမားတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ် CIA တွေလည်းရှိပါတယ်။ CIA တွေ ဘာလုပ်လဲဆိုရင် လူတွေ အထင်သေးမယ့် Conspiracy အယူအဆတွေ ရေးပြီး ထုတ်လွှင့်ကျပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် Conspiracy ဆိုတာ သတင်းလိုပဲ မိမိဦးနောက်နဲ့ စဉ်းစားပြီးယုံရပါတယ်။ စဉ်းစားဆိုပေမယ့် တချို့က သိပ်ပြီးတော့ စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာ Tower7ကြီးကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ဖြိုခံရတယ်ဆိုတာ ကလေးဦးနောက်နဲ့တောင် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Conspiracy ဝေါဟာရကို ဘယ်နေရာမှာ အသုံးပြုလဲဆိုတာတင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေ မသမာမှုတွေ/လူသတ်မှုတွေ လုပ်တိုင်း အထောက်အထား ဘယ်လောက်ပဲ ခိုင်လုံနေပါစေ Conspiracy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် တပ်ရပါတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင် ၀န်ခံတဲ့အချိန်ကျမှ News လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံလို အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ အစိုးရတွေကို စွပ်စွဲချက်မှန်သမျှ News ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါတယ်။ Conspiracy ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးမထားပါဘူး။ ဥပမာ ဘုန်းကြီးအလောင်း CNN မှာ သတင်းအနေနဲ့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ်မျာ ဓါတုလက်နက်အသုံးပြုချင်းကို သတင်းအနေနဲ့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် စာရေးရင် မြန်မာလူမျိုးတွေ စဉ်းစား လာတတ်အောင် အထူးကြိုးစား ရေးသားကျပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မြန်မာတွေဟာ သတင်းတွေ ပြောသမျှ အားလုံးယုံကျပါတယ်။ ( အဲလိုလူတွေ ရှိနေတရွေ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ဖြေရှင်းလို့လည်း ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ) အခု Tsunami Conspiracy နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာတချို့မှာ ဘယ်လိုလူတွေကို အရူးလုပ်ထားလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါမယ်။ 9/11 နောက်ပိုင်းမှာ သတင်းဌာနကြီးတွေက လူတွေကို လိမ်ချင်တိုင်း လိမ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ 9/11: The Conspiracy Files ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လို အစိုးရဝေဖန်သူတွေကို အထင်သေးအောင် လုပ်ကြံတဲ့ BBC သတင်းဆောင်းပါးမျိုးတွေက အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်လွတ်စပယ် လိမ်ချင်တိုင်း လိမ်တဲ့အဆင့်ကနေ တဖြေးဖြေး နအဖလိုပဲ သတင်းအမှောင်ချတဲ့ စံနစ်ကို ကူးပြောင်းလာပါပြီ။ ဆူနာမိကိစ္စကိုလဲ အမှောင်ချထားတာက များပါတယ်။
ကဲဒီတော့ ရှားရှားပါးပါးရေးထားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံ သတင်းဆောင်းပါးလေးကို သုံးသပ်နည်း တင်ပြပါမယ်။ ပထမဆုံး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သတင်းတိုက်ကြီး ၃ ခုမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ AFP သတင်းကို ဝေဖန် ဆန်းစစ်နည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
Conspiracy theorists see dark forces behind tsunami disaster ဆိုတဲ့သတင်းကို အရင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
အဲဒီဆောင်းပါးရဲ့ ဦးတည်ချက်ကတော့ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ စွပ်စွဲထားတဲ့ အချက်တွေကို လူတွေမယုံကြည်အောင် ဆိုက်ဝါး လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးမှာ ခိုင်မာတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေ သေသေချာချာ ရေးမပြထားပါ? eco weapon အကြောင်းလဲ မပြောပြပါ? ဂြိုလ်သားတွေ အကြောင်းထည့်ရေးတာဟာ မရိုးသားဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ထိုသို့ရေးခြင်းဖြင့် ခိုင်မာတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ စာဖတ်သူတွေ အထင်သေးသွားအောင် လုပ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
နောက်တိုက်ကွက်တစ်ခုကတော့ Dr Bart Bautisda ရဲ့ သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အတိအကျ ပြောကြားချက်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်းပါ။ အဲဒီစာကြောင်းကို ဖတ်လိုက်ရင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက် ပြောထားတာမို့ ဆူနာမိကို သဘာဝကြောင့်လို့ လက်ခံလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Dr Bart Bautisda ဆိုတာ တကယ်ရှိလား? ရှိခဲ့ရင်လည်း တကယ် မပြောပဲ လိမ်ညာ ထည့်သွင်းရေးထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) အဲဒီ Bart Bautisda ကို Dr ထည့်ပြီး သုံးထားပေမယ့် Michel Chossudovsky ကိုကျတော့ ဘာကြောင့် Professor လို့ ရှေ့မှာ ထည့်ပြီးမသုံးလဲ? အဲဒါလည်း ပညာသားပါပါနဲ့ ဆိုက်ဝါးလုပ်တဲ့ နည်းလမ်း တခုပါ။ ဘယ်သူမဆို Professor တစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကားကိုဆိုရင် ပိုပြီးလေးစားကျမှာပါ။ (Michel Chossudovsky ဟာ အပေတေ တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ) စွပ်စွဲတဲ့ဘက် ပေါ့သွားအောင် လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Professor Michel Chossudovsky ဟာ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် အာရှနိုင်ငံတွေကို သတိပေးဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့ ကိစ္စ ဒီမှာ တင်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “ထိုင်းနဲ့ သိရိလင်္ကာနိုင်ငံက ရေလုပ်သားတွေမှာ ဒေါ်လာ သန်းထောင်ပေါင်းများစွာပေးရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေ မ၀ယ်နိုင်လို့ပေါ့” ဆိုတဲ့ အပေါစားချေပချက်နဲ့ Professor ရဲ့ တင်ပြချက်ကို သေးသိမ်အောင် လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကနေ ဘာဗဟုသုတရလဲ? ဘာစဉ်းစားစရာ ရလဲ? ဘာစဉ်းတွေးခေါ်စရာမှ မရပါဘူး။ (အရေမရ အဖတ်မရ အတင်းပြော ဘာလော့တွေလို ဖတ်ရသလိုဖြစ်နေပါတယ်) မစဉ်းစားနိုင်အောင်လဲ ဆိုက်ဝါး လုပ်ထားတာပဲ မဟုတ်လား? အဲဒီဆောင်းပါး ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ လူတွေဟာ ဆူနာမိကို သဘာဝ ဘေးတစ်ခုလို့သာ လွယ်လွယ်ကူကူ ကောက်ချက်ချပြီး အမေရိကန်ကိုစွပ်စွဲတဲ့သူတွေကို အထင်သေးစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ New York Time က ဒီဆောင်းပါး လည်းဖတ်ကြည့်ပါ။ အရေမရ အဖတ်မရ ဆောင်းပါး တစ်ခုပါပဲ။
အနောက်ဘက်နိုင်ငံသတင်း စာတွေအကြောင်းပြီးရင် India Daily သတင်းစာမှ Human Hand Behind Earthquake and Tsunami? ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ အဲဒီသတင်းကို ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ AFP သတင်းဟာ အနှစ်မပါပဲ လူတွေကို ဆိုက်ဝါးလုပ်ယုံသက်သက် ဆိုတာ ပိုမိုမြင်သာနေပါတယ်။ AFP ဖတ်တုံးက ဘာမှ မသိခဲ့တဲ့ မြေငလျင်နဲ့ ဆူနာမိကို အတုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ရေးပြထားပါတယ်။ ထို့အတူပဲ အမေရိကန် စမ်းသပ်ရာကနေ လက်လွန်သွားသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ထားပါတယ်။ အိန္ဒိယရေတပ်ကိုလည်း အင်အားကြီးနိုင်ငံ တစ်ခုအနေနဲ့ စစ်ဆေးဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်းလဲ သတိပေးထားပါတယ်။ ကြည့်စမ်းပါခင်ဗျာ။ အဖြူတွေရဲ့ သတင်းစာထက် အာရှနိုင်ငံ သတင်းစာက ပိုမိုလွတ်လပ်ပြီး ရိုးသားကြောင်း မြင်လွယ်ပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြေငလျင်နှင့်ဆူနာမိကြီးသည် သဘာဝကြောင့် မဟုတ်ပဲ အမေရိကန်၏ လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ အထောက်အထားတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အတိအကျ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဆူနာမိကြီးကြောင့် လူပေါင်း ၅ သိန်းနီးပါး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သန်းနဲ့ချီပြီး အိုးအိမ်မဲ့ဘ၀မှာ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရွာအများအပြားဟာ မြေပုံပေါ်ကနေ လုံးဝ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အကြီးဆုံးသော စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ဖြစ်တယ်။ ( အမေရိကန်ကို အဖေတော်ချင်တဲ့ ၀ါဒအစွန်းရောက်တွေကတော့ အဖေခေါ်မြဲခေါ်နေမှာ သိပါတယ်။) အဲဒီစစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေဟာ အပုပ်နံ့အထွက်ဆုံး Red Cross အတွက် လူငါးသိန်းအလောင်းပြပြီး အလှူ လိမ်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သတင်းဌာနတွေ အကူအညီနဲ့ ဆူနာမိဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီတတ်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ဦးနောက်မရှိသူတွေကို လိမ်ညာခဲ့ပါတယ်။ အဲလောက် ကောက်ကျစ်တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အထောက်အထားတွေကို တပိုင်းစီခွဲပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့မှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ မြေငလျင်တိုင်းတာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ သတင်းစာတွေဟာ အမေရိကန် ကြေငြာချက်ပဲ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက ငလျင်ရဲ့ ပြင်းအားကို ပထမပိုင်းမှာ Richter scale 8 လို့ကြေငြာပြီး 8.5 ကိုပြောင်းပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် ထပ်ပြီး 8.9 ဒီနောက်9အထိ တဆင့်ပြီးတဆင့် ပြောင်းပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အမျိုးမျိုး ပြောင်းပြီးပြောနေလဲ? ဒီမှာသတိထားသင့် တာကတော့ 8 ကနေ9အထိတက်သွားတာ ဂဏန်းလေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပေမယ့် Richter scale ၁၀ ဆအထိ ကွာပါတယ်။ လှုပ်တဲ့နေရာမှာ ယိမ်းယိုင်တဲ့အားကိုကြည့်ရင် 8 နဲ့9ဟာ အဆ ၃၀ ကျော်အထိကွာပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြီးပြောနေလဲ သတိထားမိပြီလား? ပိုပြီးရုပ်ဆိုးတာကတော့ နောက်နှစ်လလောက်ကြာတော့ Richter scale အဆသုံးဆ ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။ 9.3 တဲ့ဗျ။ (နောက်ပိုင်းသတင်းတွေမှာ 9.3 လို့ပဲရေးကျပါတော့တယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်း တင်တဲ့သူတွေလည်း 9.3 အနေနဲ့ပဲ မှတ်တမ်းလုပ်ရ ပါတော့မယ်။ “အ”တဲ့သူတွေ ပေါ်ထွက်လာဦးမှာပါ) အမေရိကန်အစိုးရကတော့ ဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရတာ သူတို့အနေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာမို့ ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ အခုလိုပြောင်းသွားတာ ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။ အဲလိုပါပဲခင်ဗျာ။ အမေရိကန်အစိုးရဟာ လိမ်ရင် သိက္ခာမဲ့စွာ ဗျောင်ကိုလိမ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာခေတ်ကြီးမှာ အမေရိကန်လို ကမ္ဘာထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ တစ်ခုအနေနဲ့ အဲလောက်အဆပေါင်း Richter scale ၁၀ ဆကျော်အထိ မှားယွင်းစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကနေဒါအစိုးရရဲ့ ရေးသားချက်မှာတော့ မြေငလျင်တွက်ချက်တာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင် 0.2 ထက်တော့ ဘယ်လိုမှ မပိုနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အမေရိကန်အနေနဲ့ 8.2 ထက်ပိုပြီး မလွဲသင့်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေဖန်မေးမြန်းခွင့်ရှိတဲ့ သတင်းဌာနတွေ ဘယ်ပျောက် နေလဲသိချင်ပါတယ်။ (အတင်းပြောဘလော့တွေ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ အကြောင်းဆွေးနွေးတော့ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်သလိုမျိုးပေါ့ခင်ဗျာ) တကယ်တော့ အမေ၇ိကန် သိပ္မံပညာရှင်တွေအဲလောက် မညံ့ပါဘူး။ သူတို့ကို အထက်ကနေ ကြေငြာခိုင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းကို ကြေငြာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ India နဲ့ Indonesia နိုင်ငံတွေက မြေငလျင်တိုင်းစက်တွေမှာတော့ 6.4 ပဲ မြင်ရတယ်ဆိုပဲ။ အမေရိကန်နဲ့ စီးဝါးရိုက်ထားတဲ့ Australia ကတော့ သူတို့ မြေငလျင်တိုင်းစက်တွေက 8 အထက်ကို ပိုပြီးမတိုင်းတာနိုင်တဲ့အတွက် အတိအကျ မသိဘူးလို့ ပြောကျပါတယ်။ အဲလိုပြောတဲ့ Australia နိုင်ငံဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ 8.7 မြေငလျင်လှုပ်တော့ သူတို့က ကြေငြာချက်ထုတ်တယ်ဆိုပဲ။ အဲလိုပါပဲ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာ လိမ်၇င် ဗျောင်လိမ်ကျပါတယ်။
9.3 ထက် အဆပေါင်း (၃၀)လျောနည့်းတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမြေငလျင်ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ 6.4 ကို အမှန်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တကယ်လို့ 9.3 ဆိုရင် မိုင်ပေါင်း ၆၂၀ ကျော် အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ အများအပြား ပြိုကျကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသဘောအရဆိုရင် Kuala Lumpur နဲ့ စင်ကာပူမြို့အထိ တိုက်တာအဆောက်အဦးတွေ ပြိုကျဖို့ရှိပါတယ်။ 1995 မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Kobe earthquake ဟာ Richter scale အဆနှစ်ဆယ်လျော့တဲ့ 7.2 အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ ဂျပန်လို အဆောက်အဦးကောင်းတွေရှိတဲ့ Kobe မြို့တောင် အားလုံး ပြိုလဲကုန်တာပဲ မဟုတ်လား? ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ပြင်းထန်ဆုံး 9.3 အားရှိတဲ့ မြေငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့အရမ်းနည်းတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမြို့ကြီးတွေက အဆောက်အဦးတွေ ပြိုကျတာမရှိပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားမှာတောင် ဆူနာမိဟာ ကုန်းတွင်း ၁၀ မိုင်အထိပဲ ၀င်ပါတယ်။ ရေစားပြီးပါသွားတဲ့ အိမ်တွေပဲရှိပါတယ်။ မြေအက်ကြောင်းထတာလဲ မရှိပါဘူး။ (တကယ်လို့ ၂၀၀၄ မြေငလျင်မှာ တိုက်အိမ်ကြီးတွေ လဲပြိုတာမြင်ရင် ပြောပြပါ) အင်ဒိုနီးရှား ဆူနာမိ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ မြေငလျင်နဲ့ နီးနေပြီးပြိုလဲတဲ့အိမ် တစ်ခုမှ မတွေ့ပါ၊ ဗီဒီယို(၁) .. ဗီဒီယို (၂) . . . ဗီဒီယို (၃) ဒီလောက်ဆိုရင် အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ သတင်းဌာနကြီးတွေ ပေါင်းလိမ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပြီ်ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရ အပြစ်က ဂဏန်းလေး လိမ်ပြောယုံပဲ ထင်ရင်မှားသွားပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ပြစ်မှုကတော့ မြေငလျင် အတုဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြေငလျင်အတုဖန်တီးတယ်လို့ပြောရင် မြန်မာတွေက ကလေးစကားတွေပြောနေတယ်လို့ ယူဆကျပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ စိတ်ကူးယဉ် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ သိပ္မံပညာဟာအရမ်းကို ထွန်းကားနေပြီး လူတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့ နည်းပညာလည်း အလွန်ကိုတိုးတက်နေပါတယ်။ အမေ၇ိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး William Sebastian Cohen က မြေငလျင်ကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း 1997 ခုနှစ်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိနေပြီမို့ အမေရိကန်ကို မြေငလျင်လက်နက်နဲ့ လာရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်ကြောင်းလည်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ (အသေးစိပ်စိတ်ဝင်စားရင် ကိုးကားချက်ထဲမှာ အကျယ်တ၀င့် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။) 2003 မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Iran မြေငလျင်ကိုလည်း အမေရိကန် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ (ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒဂုံက လေမုန်တိုင်းကြီးဟာ အမေရိကန် လက်ဆော့တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်) အမေရိကန်အစိုးရဟာ သူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာမကပဲ နိုင်ငံတကာလိုက်ပြီး လူသတ်နေတဲ့ အစိုးရဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ၂၀၀၄ မြေငလျင်ကိုကြည့်ရင် ပေါက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုနဲ့သာ တူကြောင်း ဆန်းစစ်ဝေဖန်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ နူးကရီးပေါက်ကွဲမှုအားနဲ့ လှုပ်စေတဲ့ မြေငလျင်လို့ယူဆကျပါတယ်။ (ဟီးဟီး လူပိန်းပြောပဲ ပြောတတ်ပါတယ်) အဲလိုယူဆနိုင်လောက်အောင် သာမန်မြေငလျင်တွေနဲ့ မတူတဲ့ လှိုင်းပုံစံနဲ့ လှုပ်ပုံတွေကွာတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အဲဒီဆန်းစစ်ချက်တွေဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မြေငလျင်အတုလုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတာတော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောကြားချက်နဲ့ ကိုးကားထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံရှင်းပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြေငလျင် အတုလုပ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းဟာ အလကားလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကို သတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆူနာမိလူသတ်မှုကြီးကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆူနာမိဗုံန်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၄ နှစ်ကတည်းက တီထွင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဆူနာမိဗုံးဟာ atom bomb ဗုံးလိုပဲ မြို့လုံးကျွတ်သုတ်သင်နိုင်တယ်ဆိုပဲ ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့သိပ္မံပညာအရမ်းထွန်းကားတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဆူနာမိဗုံးကို ယခင်ကထက် အဆပေါင်းများစွာ အစွမ်းထက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ သတင်းစာတွေထဲက အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာ ဆူနာမိဖြစ်ခဲ့တာ ရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယအစိုးရဟာ သမိုင်းမှာ ဆူနာမိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာဆိုတာ သတင်းမှားတွေ ရေးတာက များပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဆူနာမိဆိုတာကို ၂၀၀၄ မှာမှ ကြားဖူးတယ်ထင်ပါတယ်။ ရှေးလူကြီးများ ပြောသံ မကြားဖူးကြောင်း မိဘများနှင့် ဦးလေးအဒေါ်များမှ ဖြေကျပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဆူနာမိကို မြန်မာစကားလုံး မရှိခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။( ကျနော်မွေး၇ပ်မြေဟာ အညာမှာဆိုပေမယ့် အောက်ဘက်မှ လူများနဲ့ ကူးလူးဆက်သွယ်တဲ့ ရွာဖြစ်ပါတယ်။ အဖေရဲ့ပြောစကားကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ အမှန်လို့ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှေးစကားထဲမှာ ပြောဆိုသံကြားဖူးတယ်ဆိုရင် တစ်ချက်လောက် ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ)
india ocean သမိုင်းမှာလဲ မဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ ၊ 2005 ခုနှစ် March အင်ဒိုနီးရှား မှာ 8.7 မြေငလျင်ကြီးလှုပ်တော့လည်း ဆူနာမိ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ india ocean ရဲ့ မြေကြောအနေအထားအရ ဆူနာမိ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် 2004 မှာ ဘယ်လိုကြောင့် ဆူနာမိကြီး ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာ သိပ္မံပညာရှင်များ စဉ်းစားမရနိုင်ကြောင်းကို India သတင်းစာမှာ ရေးထားပါတယ်။ အခုဖြစ်လာတဲ့ ဆူနာမိဟာ အကြီးဆုံး ဆူနာမိကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အင်ဒိုးနီးရှားမှာဆိုရင် ပေ၁၀၀ အထိတောင်မြင့်တယ်လို့ ပြောကျပါတယ်။
လိမ်ရင်ဗျောင်လိမ်တယ်ဆိုတဲ့ မူအတိုင်း အမေရိကန် မြေငလျင်ဌာနက သူတို့ဟာ ဆူနာမိ Sri Lanka ကိုဝင်ရောက်တဲ့ အကြောင်း သတင်းထဲ မြင်တော့မှ သိတာတဲ့ဗျ။ ဆူနာမိ Sri Lanka ကိုဝင်ရောက်တာ ငလျင်လှုပ်ပြီး ၂ နာရီလောက်ကြာမှပါ။ 24/7 ကမ္ဘာတ၀န်းလုံးကို ဂြိုလ်တုကနေ ထောက်လှမ်းနေတဲ့ မြေငလျင်ဌနကြီးဟာ2နာရီလုံးလုံး မသိဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့သလား? အရမ်းအင်အားကြီးတဲ့ ငလျင်ကြီးဖြစ်သွားတာကို ၂ နာရီလုံးလုံး မေ့ပြစ်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
အဲလောက်ကြီးတဲ့ဆူနာမိကြီးကို အမေရိကန်နဲ့ ဒီမိုကရေစီသတင်းဌာနတွေရဲ့ ဖုံကွယ်မှုကို အခြေခံပြီး အမေရိကန်လက်ချက်လို့ တောသားနှစ်ယောက် ယူဆပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ ဆူနာမိဖြစ်ပေါ်နေတာကို သိနေပါလျက်နဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကို အသိပေးအကြောင်းကြားချင်း ပျက်ကွက်တာဟာ သံသယကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ ( သဘာဝဘေးဒဏ်ကျမယ်ဆိုတာ တင်ကြိုသိရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ပြောဆို အသိပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်) ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်ပုံမှာလည်းပဲ ကယ်ဆယ်ရေးထက် နယ်ချဲိ့တဲ့ အထာက ပိုပေါ်နေပါတယ်။
အစိုးရတွေထဲမှာ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲဆုံးကို ပြောပါဆိုရင် အမေရိကန်ကို ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်ကျစ်ပုံကတော့ ကန်းကုန်အောင် ကောက်ကျစ်ပါတယ်။ ကြည့်လေဗျာ။ မြောက်ကိုးရီးယားကို Nuclear ထုတ်နိုင်အောင် သူပဲလုပ်ခဲ့တာပဲ။ မြောက်ကိုရီးယား Nuclear ထုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယား လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပြီး အတင်းကို လက်နက်တွေ ထိုးရောင်းခဲ့တယ်မဟုတ်လား?
ဆူနာမိကိစ္စမှာလဲကြည့်ပါ။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမိကြီးကို သတင်းဌာနတွေ အကူအညီနဲ့ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်ဗျာ။
ဘယ်လိုကူညီလဲ တချက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ကယ်ဆယ်ရေး လွတ်လိုက်တာ USS Abraham Lincoln နဲ့ USS Bonhomme Richard (အပေါ်ကပုံကို Click လုပ်ကြည့်ပါ) အမည်ရတဲ့ လေယဉ်တင်သဘောင်္အုပ်စုကြီး နှစ်စုကို ကယ်ဆယ်ရေးအမည်နဲ့ လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသဘောင်္အုပ်စုထဲမှာ Nuclear ရေငုတ်သဘောင်္နှင့် တိုက်သဘောင်္များစွာပါဝင်တဲ့အပြင် တိုက်လေယာဉ် ပေါင်း 70 ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသဘောင်္တွေမှာ Nuclear လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် အာရှနိုင်ငံတွေ အားလုံးကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြာကျအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ USS Abraham Lincoln ဟာ ဟောင်ကောင်ကနေ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ဆူနာမိကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လှည့်လာတယ်လို့ အမေရိကန်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် USS Abraham Lincoln ဟာ သာမန် စစ်သား ၅၀၀ ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအချိန်မှာ စစ်သားပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်။ အဲဒီသဘောင်္က စစ်သား ဘာပြောလဲဆိုရင် သူတို့ အခုလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့ တစ်နှစ်ကြိုပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီစကားဟာ အင်မတန်ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အမေရိကန်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုးလုပ်ဖို့ တနှစ်အချိန်ယူပြီး ရေးစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါ။ အမေရိကန် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ဆူပူအောင်လုပ်ဖို့ စစ်သားတွေဟာ တစ်နှစ်လောက်ကြိုပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား?
(1) အီရတ်မှာ စစ်သားအင်အား အရမ်းလိုနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် USS Abraham Lincoln သဘောင်္ပေါ်မှာ စစ်သား 1,500 အပိုတင်ပြီး Hongkong ကိုသွားနေလဲ?
(2) ဘာကြောင့် လက်နက်အင်အား အပြည့်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လာလုပ်သလဲ?
(3) အဓိကလိုအပ်တဲ့ ခုတင်တစ်ထောင်ဆန့် ဆေးရုံသဘောင်္နဲ့ ရေသန့်စင်ရေးလုပ်ပေးတဲ့ သဘောင်္တွေကိုတော့ မလွှတ်လဲ?
(4) ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောတွေကို ဘာကြောင့် အိန္ဒိယအစိုးရ သူတို့ရေပိုင်နက်ထဲကနေ ထွက်ဖို့ ရာဇသံပေးသလဲ?
(5) ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို စစ်သားတွေ တစ်နှစ်ကြိုပြီးလေ့ကျင့်ထားလဲ?
(6) ကူညီရေးနဲ့ မဆိုင်ပဲ အဲလိုစစ်အင်အား အလုံးအရင်း ဘာကြောင့် ဖြန့်ကျက်လဲဆိုတဲ့ အဓိက မေးခွန်းကို အမေရိကန် ဘာကြောင့် မဖြေလဲ?
(7) တပါးနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Rusty Blackman ကို ဘာကြောင့် ဦးဆောင်ခိုင်းလဲ?
အဲဒါတွေကို သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ လေယဉ်တင်သဘောအုပ်စုဟာ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်မဟုတ်ပဲ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ သိရိလင်္ကာနိုင်ငံ အစိုးရတွေကို ချိမ်းခြောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ Lt. Gen. Rusty Blackman ကို အသုံးပြုထားတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး ဆူနာမိ အကြောင်းကို အမှန်အတိုင်း မပြောဖို့နဲ့ သူတို့ကို မဆန့်ကျင်ဖို့ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ ပါကစ္စတန်ကို အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ မကူညီရင် ဗုံးကျဲပြီး ကျောက်ခေတ်ပြန်ရောက်သွားအောင် လုပ်မယ်လို့ ချိမ်းခြောက်တဲ့ ရာဇ၀င်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခုဟာ ချိန်းခြောက်တာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလောက်ယုတ်မာတဲ့ အမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ယုတ်မာရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေကို ထာဝရ ချိမ်းခြောက်ဖို့ ထိုင်းမှာ စစ်အခြေစိုက်စခန်းပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ ဆိပ်ကမ်းကိုလည်း ပြန်လည် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်းမှာ စစ်အင်အားတွေ အဆမတန်တိုးချဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်းဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးကြောင့် India Daily သတင်းစာက သူတို့အစိုးရကို ဘာတွေဖြစ်လဲ စုံစမ်းဖို့ တိုက်တွန်းထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန် စစ်ရာဇ၀တ်မှုကြီး ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါမှ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအမေရိကန်အနေနဲ့ ဆူနာမိဗုံးမချမိ မြေငလျင်လှုပ်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမြေငလျင်က အင်အား သိပ်နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆူနာမိဗုန်း ကတော့ ပေ ၁၀၀ အထိလှိုင်းလုံးမြင့်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆူနာမိကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ 6.4 ငလျင်အားနဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆူနာမိကြီး ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ အဓိပါယ်လုံးဝ မရှိဖြစ်နေပါတယ်။ လူတွေက အမေရိကန်လက်ချက်ဆိုတာ ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားမှာတော့ စိုးရိမ်ဟန်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လူတွေကို ငလျင် အင်အားအရမ်းကြီးလို့ ဆူနာမိဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ထင်မြင်အောင်ကြိုးစားထားတဲ့ပုံ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငလျင်ကိန်းဂဏန်းတွေကို အဆပေါင်း ၃၀ အထိတိုးပြီး လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြေငလျင် ကိန်းဂဏန်းကြီး လိမ်ထားတာကို ဖုံးကွယ်ပေးဖို့ သတင်းဌာနကြီးတွေက တာဝန်ယူရပါတယ်။ သမိုင်းမှာ ဆူနာမိရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အထိ လိမ်ညာကျပါတယ်။ ဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ ဒီဆူနာမိကြီးကို သဘာဝကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပြီး အမေရိကန်ကို ကမ္ဘာအလယ်မှာ အရှက်ရအောင် လုပ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကို ကြိုတွက်ထားပုံရပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ရင် အမေရိကန် ပြည်တွင်း တည်ငြိမ်မှုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Nuclear လက်နက်အပြည့်နဲ့ လေယဉ်တင်သဘောင်္အုပ်စုကြီး နှစ်ခုကို လွတ်ပြီး သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တာနဲ့ Nuclear နဲ့ တိုက်ခိုက်မယ်လို့ နောက်ကွယ်ကနေ ချိမ်းခြောက်တာမျိုး လုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်ချိန်းခြောက်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ တရုပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ထိုင်းမှာ U-Tapao ရေတပ်စခန်းကို ပြန်လည် ဖွင့်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် အမေရိကန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရက်စက်ဆုံးသော စစ်ရာဇ၀တ်မှုကြီး ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ မရှင်းတာနဲ့ မှားတာတွေရှိတယ်ထင်ရင် မေးနိုင်/ ပြောပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(အကူအညီပေးကျပါ။ ။ ကျနော်တို့ အခုစာရေးတာ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေနဲ့ သဒ္ဒါအမှားတွေ ပါနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာစာအားနည်းတော့ ဘယ်လောက်ပဲစစ်စစ် အမှားကို မမြင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီဆောင်းပါး စာလုံးပေါင်းလေးတွေနဲ့ သဒ္ဒအမှားလေးတွေကို ပြုပြင်ပေးချင်ရင် Word ထဲမှာရိုက်ပြီး ဆောင်းပါးတပုဒ်လုံးကို Ccmment မှာ Paste လုပ်ပြီး တင်ပေးပါ။ ပြင်ပြီးသားစာကို ဆောင်းပါးအဖြစ် တင်ပေးပါမယ်။ တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူတွေက ကူညီမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ)
Devastating tsunami bomb viable, say experts
SecDef Cohen warned of earthquake weapons
U.S. Uses Tsunami to Military Advantage in Southeast Asia
Why the March 8.7 Quake Did Not CauseaTsunami
Hard Proof That Asian Tsunami WasaWar Crime
Foreknowledge of A Natural Disaster
US Nuclear Testing As Possible Culprit for Indian OCn Quks http://www.counterpunch.org/rajiva12302004.html
Was the Christmas/Boxing Day 2004 Earthquake-Tsunami Event
Seismic (Tectonic) Warfare or Environmental Warfare by Default?
What Did the US Know and When Did It Know It?
Human Hand Behind Earthquake and Tsunami? (India Daily)
PAKISTAN: US threatened to bomb Pak into stone age
US denies ‘foreknowledge’ of Asian tsunami (Pakistan Daily Times)
Aceh: A Victim of Tsunami & Occupation; Will the Indonesian Army Use the Tsunami As A Cover to Continue Its Slaughter of the People of Aceh?
New findings super-size our tsunami threat
Powell Says U.S. Effort On Tsunami Relief Reflects U.S. Values
False Allegations Regarding South Asian Tsunami Reported
INDONESIAN EARTHQUAKE: Scientists struggle to explain why huge
Myths Run Wild in Blog Tsunami Debate (NY time)
http://www.youtube.com/watch?v=F2tMPdWjAek&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iwu-eNJPuSE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kwIAgy4y6EY&feature=related
(ယုံကြည်ချက်။ ။ ဒီမိုကရေစီ၊ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ အညီ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ နည်းအောင် လုပ်ချင်းသည်သာ လက်တွေ့ကျသော ငြိမ်းချမ်းရေးစံနစ်ဖြစ်ပေါ် လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by * In Search of Truth * at 11:04 PM
hey man , i really doubt about that, that wasafeak tsumani
January 29, 2008 at 3:48 AM
စာလုံးပေါင်းမှားတာ သဒ္ဒါမမှန်တာ မရှိသလောက်နည်းသွားပါပီ ဖြစ်နိုင်ရင် ယ- ရစ်ကိုရေးတဲ့နေရာမှာ Shift + B ကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ "က" လိုစာလုံးမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရကောက်ဆိုရင်လည်း Shift +7ကိုတွဲနှိပ်စေချင်ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
1. Why did US want to kill so many people from these country? U know that only Myanmar is US's enemy. If US can invent tsunami bomb, why did they not apply for their enemy countries?
2. As u say, since US threated these countries, the scientists in these countries cannot say the truths at that time. But now there is no threats. So why do these scientists say the truths?
3. U always tell that all medias group lie. But u know that CCTV is not the friend of the West. There is no news or stories in CCTV that say like u. Why? The Chinese scientists also afraid the US :P
4. I suppose that even the SPDC newspapers don't dare to say like u because the editors of SPDC newspapers are not as crazy as u. If u r sure about these things, try to publish ur article in SPDC newpapers or some journals in Myanmar. If so, all Myanmar people can know how US kill so many people. Can u do that?:P
P.S If u can prove these things clearly, u should send this article to US's enemy countries. U can get so many prizes from them. :P
ပေါက်တကရ documentary တွေကြည့်ပြီး အတွေးမကြောင်ပါနဲ့ ဗျာ.. အမေရိကန်မကောင်းကြောင်းရှာကြံရေးပြရုံနဲ့ မြန်မာပြည်ကောင်းစားလာဖို့မရှိပါဘူး။ အားအားယားယား..ဒါလုပ်မဲ့အစား .. ကိုယ့်ပြည်တွင်း ယိုယွင်းတာတွေကို ထောက်ပြရေးပြပါလား..ပြင်နိုင်တဲ့တာဝန်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေ သိတော့ ပိုအကျိူးမရှိဘူလား?
January 30, 2008 at 6:13 AM
* In Search of Truth * said...
ပေါက်ကရ DVB, BBC သတင်းတွေကို နားထောင်ပြီး အရူးဖြစ်နေတဲ့ အစ်ကိုက ကျနော်တို့ကို အဲလိုလာပြောတာတော့ ရယ်စရာကြီးဖြစ်နေပြီဗျ။ အခုရေးသားတဲ့ထဲမှာ ကျိုးကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အထောက်အထားတွေ အားလုံးပါနေပါတယ်။ ဦးနောက်တစက်မှာ မရှိလို့ ဒုတ်နဲ့ခေါင်းရိုက်လို့ ဦးနောက်ထွက်တာကို ယုံတဲ့သူကယုံ၊ ဘုန်းကြီးအလောင်းဗီဒီယိုကိုယုံတဲ့သူကယုံနဲ့ အရှက်တစက်မှ မရှိပဲအဲလိုပြောတာ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါဗျာ။
ပြီးတော့ အစ်ကိုတို့က အမေရိကန်ကို အဖေတော်တော်ကို တော်ချင်ပုံရတယ်နော်။ အမေရိကန် လူသတ်တာကို အကြောင်းအကျိုးတွေ အများကြီးနဲ့ တင်ပြထားတာ ဘာကြောင့် မဆွေးနွေးရဲသလဲခင်ဗျာ? ဘယ်အပိုင်းကို အစ်ကိုမယုံသလဲခင်ဗျာ?
ကျနော်အနေနဲ့ တစ်ပုဒ်ချင်းကို ပြန်ဖြေပါမယ်ခင်ဗျာ
(1. Why did US want to kill so many people from these country? U know that only Myanmar is US's enemy. If US can invent tsunami bomb, why did they not apply for their enemy countries? )
Bush ကိုတရားရုံးမှာ ခေါ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရင်သိနိုင်မှာပါ။ အစ်ကိုက အဲဒီမေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတော့ အထောက်အထားတွေ ကြောင်းကျိုးပြချက်တွေနဲ့ ရေးထားတာကို မယုံကြည်လို့လားခင်ဗျာ? တကယ်လို့ မိမိကိုယ်ပိုင် ဦးနောက်နဲ့ စဉ်းစားတတ်သူ ဖြစ်ရင် ပြန်ဖြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
(2. As u say, since US threated these countries, the scientists in these countries cannot say the truths at that time. But now there is no threats. So why do these scientists say the truths? )
နအဖနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်အစိုးရ ဆိုတာ လိုအပ်မှ လိမ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှ သတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်တွေကို ချိမ်းခြောက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
(3. U always tell that all medias group lie. But u know that CCTV is not the friend of the West. There is no news or stories in CCTV that say like u. Why? The Chinese scientists also afraid the US :P)
CCTV မလာတာနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာ။ တချက်လောက်ဖြေပေးပါခင်ဗျာ။
(4. I suppose that even the SPDC newspapers don't dare to say like u because the editors of SPDC newspapers are not as crazy as u. If u r sure about these things, try to publish ur article in SPDC newpapers or some journals in Myanmar. If so, all Myanmar people can know how US kill so many people. Can u do that?:P)
အရေမရ အဖတ်မရ ပြောကြားချက်အတွက် ပြန်ဖြေရန်မလိုပါ
(P.S If u can prove these things clearly, u should send this article to US's enemy countries. U can get so many prizes from them. :P)
ကျနော်ရေးထားတာ သူငယ်တန်းကျောင်းသားတောင် နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် မရှင်းဘူးလို့ ပြောနေလဲခင်ဗျာ။ အစ်ကိုအနေနဲ့ သူငယ်တန်းကို ပြန်တက်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း အစ်ကိုကို ပြန်မေးချင်ပါတယ်။ ပြန်ဖြေရဲမယ် မထင်ပါ။ DVB, BBC သတင်းလောက်ပဲ နားထောင်တဲ့သူတွေ ၊ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည် ကော်ပီကူးပြောသမျှကို လေးစားနေသူတွေ ဖြေနိုင်စွမ်းရှိမယ်လည်း မထင်ပါ။
(၁) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငလျင်ကြီးဖြစ်တဲ့ 9.3 မြေငလျင်ကြီးလှုပ်သွားတယ်ပြောပါတယ်။ ဘယ်သတင်းမှာ မြေငလျင် အပျက်အစီးသတင်းပါလဲ?
(၂) ဆူနာမိ ဒုက္ခသည်ပဲကြားမိပါတယ်။ မြေငလျင်ဒုက္ခသည်မကြားမိပါလားခင်ဗျာ
(၃) အမေရိကန် မြေငလျင်ကို အဆပေါင်းများစွာပြောင်းပြီးဘာကြောင့် ပြောတယ်ထင်ပါသလဲ?
(၄) သတင်းစာတွေ အမေရိကန်အစိုးရ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ပြောတာကို ဘာကြောင့် မပြောပဲနေသလဲခင်ဗျာ?
ကို na နဲ့ ကို မျိုး
ကျနော်တို့အနေနဲ့ သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးတောင် နားလည်အောင် ရေးထားပါတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာကတော့ ဆွေးနွေးလာတဲ့သူတွေဟာ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ တည်တည်တံ့တံ့ မဆွေးနွေးဝံ့ကျဘူးဗျ။ အဲဒီလို တည်တည်တံ့တံ့မဆွေးနွေးဝံ့နေသရွေ့ ဘယ်တော့မှ မြန်ပြည်အရေးကို ဖြေရှင်းလို့ရမယ်မထင်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း နအဖ အတင်းပြောရင်း အသက်တွေ ဆက်ကြီးသွားမယ်ထင်ပါတယ်
U should know that we should use lateral thinking in this case, because u and i are not specialists in earthquake. U should try to get proof from the earthquake scientists. U will say that u get facts from one russian scientist. But u should know that all russian scientists cannot agree with it.
One scientist from US enemy countries write the conspiracy. But it is not believed even by the scientists from same country or another US enemy countries. That is the reason why Conspiracy like this article are not believed (except by brainless u).
Therefore in this case, we should use lateral thinking as the questions i asked in my last comment. Another lateral thoughts are as follow.
1. If the article u wrote is true, why do the scientist in Russia and China try to publish these things to the worlds. If it can be proved, how good for them to attack US. But they didn't try to prove this because it is not true.( that is why i asked third question,
Ur answer may be the scientists from these countries are not as smart as u. :P
2. နအဖနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်အစိုးရ ဆိုတာ လိုအပ်မှ လိမ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှ သတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
This is ur answer. Well! why do US need to kill so many people?
3.Let say US could invent the tsunami bomb and test it successfully. It is about over3years ago. Why do US apply it for second time to its enemy countries such as Iran?
There are many things to laterally think. U always tell to apply the own brains. But u should know that u cannot apply the own brains in all fields because u cannot know everything well. So we need specialists and scientists to prove the things.
So I want to sincerely advise u not to waste time to prove the things u don't know well.
Exception: if it is ur profession, try hard! :P
February 2, 2008 at 5:11 AM
(U should know that we should use lateral thinking in this case, because u and i are not specialists in earthquake. U should try to get proof from the earthquake scientists. U will say that u get facts from one russian scientist. But u should know that all russian scientists cannot agree with it.
Therefore in this case, we should use lateral thinking as the questions i asked in my last comment. Another lateral thoughts are as follow.)
ကိုHan ကြည့်ရတာ အဖေကြီးအမေရိကန်အတွက် တော်တော်ကြိးကို ကြိုးစားပန်းစား နာနေပုံရတယ်။ ကျနော်က မြေငလျင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမိသလောက် အကိုးအကားတွေနဲ့ စဉ်းစားပြီး အမေရိကန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ အစ်ကိုတို့သာ ဦးနောက် တစက်မှ မသုံးပဲ သတင်းဌာနကြီးတွေ ပြောသမျှယုံ၊ အစ်ကိုတို့ အဖေကြီး အမေရိကန် ပြောသမျှ လက်ခံလုပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ပိုပြီး စဉ်းစားတတ်လဲဆိုတာ ရှင်းပြဖို့ လိုသေးသလားခင်ဗျာ? ကျနော်က ဒီဆောင်းပါးကို သူငယ်တန်းအဆင့်လောက်စဉ်းစား တတ်တဲ့သူတွေ ကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုသူငယ်တန်း အဆင့်လောက် စဉ်းစားတတ်အောင် ကျောင်းပြန်တက်ပါဦး။ ပြီးမှ ပြန်ဖတ်ပါ။ ရှရှ၊ တရုပ်က ဘာကြောင့် ဘာမှ မလုပ်လဲဆိုတဲ့ အချက်လက်လေးပဲ ပြောတတ် စဉ်းစားတတ်တာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက်အတော်ကြီးကို သိက္ခာထိခိုက်စေပါတယ်။ (Professor Michel Chossudovsky တောင် အဲလို မစဉ်းစားမိဘူးဗျာ။ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီး ငတုံးတစ်ယောက် ပြန်စဉ်းစားဖို့ပါ) BBC သတင်းမှာပါမှ ယုံမယ်ဆိုတဲ့ ဦးနောက် ဒီခေတ်မှာ အသုံးမ၀င်တော့ပါခင်ဗျာ။
(Ur answer may be the scientists from these countries are not as smart as u. :P)
(This is ur answer. Well! why do US need to kill so many people?)
သိပ်ပြီးမတုံးပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုက တကယ်ကို ရူးနေပြီထင်တယ်။ ကျနော် BUSH ကို တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးခွင့်ရထားတဲ့ သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တချက်လောက် သတိထားပါ။ အမေရိကန်တရားရုံးတောင် lacy peterson ကိစ္စမှာ ဘာကြောင့် သတ်လဲဆိုတဲ့ အဖြေတောင် မသိပဲ သူ့ယောကျားကို သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစ်ကို အဖေတော်ထားတဲ့ တရားသူကြီးတွေထက်တော့ ကျနော်ကတော်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ချပါ
(3.Let say US could invent the tsunami bomb and test it successfully. It is about over3years ago. Why do US apply it for second time to its enemy countries such as Iran?
Exception: if it is ur profession, try hard! :P)
ဆိုလိုရင်းကို သေခြာလေ့လာကြည့်တော့ ကိုယ်ပိုင် ဦးနောက်နဲ့ မစဉ်းပါနဲ့။ (ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်တပည့်ပီပီ သူတောင်းစားတောင်ပြောတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နေရာမှာ ဦးနောက်မရှိပါ။ အစ်ကိုတို့ ဦးနောက်တွေက ကောင်းမှ မကောင်းတာကိုးဗျ။ ဟားဟား။ ) အစ်ကိုတို့ အဖေ အမေရိကန်ကြီးပြောသမျှကို ယုံပါ။ သတင်းဌာနကြီးတွေ ရေးသမျှကို ယုံပါဆိုတဲ့ သဘောပဲဗျ။ ဟား ဟား။ အဖေကြီးအတွက် တော်တော် အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲပါဗျာ။ အမောပြေ အတင်းပြော ဘလော့တွေမှာ အရေမရ အဖတ်မရ နအဖ အတင်းပြောထားတာလေးတွေ သွားဖတ်လိုက်ပါဦး။
February 2, 2008 at 10:25 AM
Why do u make so many personal attacking?
အကြောင်းအရာပေါ်မှာ တည်တည်တံ့တံ့ မဆွေးနွေးဝံ့ကျဘူးဗျ။
This is now for u. I suppose that u cannot clearly understand well about the lateral thinking. Study it! It can improve ur brain.
When I write scientists and specialist, why do u suppose they are from US. I admire v much the scientists from Russia and China and all over the world. In some fields, Russia are better than US, e.g, in astrology.
And why do say me Daw Su Kyi's person? I have not said anything that I suppose her. Why do u say the things that are not related the topics. I suppose again as
I also discuss why the conspiracy are not believed. This is not only for the conspiracy for US but also for the conspiracy for other countries.
I know the reasons why SPDC kill the people in September. The main reason is to maintain their power. It is needed for them. But u don't know the reason why US kill so many people. So don't write like
နအဖနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်အစိုးရ ဆိုတာ လိုအပ်မှ လိမ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှ သတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
The meaning of the last paragraph in my last comment is that if u want to accept the fact in certain field, u needed the proofs from some specalists in that field whatever from US or Russia or other countries.
I have not made any personal attacks in this comment. So pls discuss well that is related the topics.
သို့ ကို Han
Why do u make so many personal attacking?)
အဲလောက်မပေါပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အစ်ကို့ရဲ့ ပထမဆုံး comment မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ဘယ်သူက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်လဲဆိုတာ ပြောပါ။
(အကြောင်းအရာပေါ်မှာ တည်တည်တံ့တံ့ မဆွေးနွေးဝံ့ကျဘူးဗျ။
This is now for u. I suppose that u cannot clearly understand well about the lateral thinking. Study it! It can improve ur brain.)
ကိုယ်တိုင်အရင် ဦးနောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါခင်ဗျာ။ အရူးဆေးရုံက အရူးတွေ ဆရာဝန်ကို အရူးလို့ပြောနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်
(When I write scientists and specialist, why do u suppose they are from US. I admire v much the scientists from Russia and China and all over the world. In some fields, Russia are better than US, e.g, in astrology. )
ဘယ်သိပ္မံပညာရှင်မှ ဆူနာမိဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ရှာမတွေ့ဘူးလို့ရေးထားတာ မတွေ့မိဘူးလားခင်ဗျာ?
(And why do say me Daw Su Kyi's person? I have not said anything that I suppose her. Why do u say the things that are not related the topics. I suppose again as
အကြောင်းအရာပေါ်မှာ တည်တည်တံ့တံ့ မဆွေးနွေးဝံ့ကျဘူးဗျ။)
ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်တပည့်တွေလိုပဲ ပေါတောတောနိုင်တာချင်းအတူတူမို့ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်တပည့်လိုပဲ ပြောလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ ရှင်းပါတယ်နော်?
(I also discuss why the conspiracy are not believed. This is not only for the conspiracy for US but also for the conspiracy for other countries.)
တကယ်ကိုရူးတဲ့ အရူးပဲဗျာ။ တကယ်ပဲ။ conspiracy ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ အတွက်ပဲအသုံးပြုတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြထားတာ မတွေ့ဘူးလား?
(I know the reasons why SPDC kill the people in September. The main reason is to maintain their power. It is needed for them. But u don't know the reason why US kill so many people. So don't write like
နအဖနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်အစိုးရ ဆိုတာ လိုအပ်မှ လိမ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှ သတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
အစ်ကိုရေ နအဖလို မစို့မပို့လောက်လေးသတ်တာ စာရင်းထဲထည့်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဗျာ။ ကျနော်က အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို 9/11 နဲ့ 7/7 ပုံစံမျိုး အချီကြီးသတ်တဲ့ အကြောင်းပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ။ ဒီဘလော့က သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားပါ။
( The meaning of the last paragraph in my last comment is that if u want to accept the fact in certain field, u needed the proofs from some specalists in that field whatever from US or Russia or other countries. )
အစ်ကိုအားကိုးနေတဲ့ BBC, CNN သတင်းဌာနတွေက ဘယ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ထောက်ခံချက်ရှိလို့ သဘာဝ ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်လဲ? သိပ္မံပညာရှင်တွေဟာ ၂၀၀၄ ဆူနာမိဟာ သဘ၀ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရှာမတွေ့ဘူး ပါဘူး။ မျှမျှတတတ တွေးခေါ်တတ်ပါစေ
(I have not made any personal attacks in this comment. So pls discuss well that is related the topics.)
ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်တပည့်ပီပီ အရှက်တစက်မှကိုမရှိ လိမ်ညာနေပြန်ပြီ။ personal attack ရှိမရှိ အခု comment ကိုပြန်ဖတ်ပါ။ ရှင်းပါတယ်နော်?
February 2, 2008 at 1:26 PM
don't angry so much! there are many conflicts in ur comments.
(personal attack ရှိမရှိ အခု comment ကိုပြန်ဖတ်ပါ။ ရှင်းပါတယ်နော်?)
the personal attack in this comment are
-ပေါတောတောနိုင်တာချင်းအတူတူမို့ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်တပည့်လိုပဲ ပြောလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ ရှင်းပါတယ်နော်?
-ကိုယ်တိုင်အရင် ဦးနောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါခင်ဗျာ။ အရူးဆေးရုံက အရူးတွေ ဆရာဝန်ကို အရူးလို့ပြောနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်
so many personal attacks! Why do u say no personal attack?
ur answer is not related with my comment in this paragraph. I just point out the conflict in ur two comments.
အစ်ကိုအားကိုးနေတဲ့ BBC, CNN သတင်းဌာနတွေက ဘယ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ထောက်ခံချက်ရှိလို့ သဘာဝ ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်လဲ?
I have not said anything that i believe the BBC and CNN at all. I also watch other channel like CCTV, NHK, etc.
သိပ္မံပညာရှင်တွေဟာ ၂၀၀၄ ဆူနာမိဟာ သဘ၀ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရှာမတွေ့ဘူး ပါဘူး။
It isajoke. When the other reasons can't be found, should it be concluded that this is because of nature? U should know that human have not known all the secrets of nature. e.g. people can't know when they encounter the earthquake.
I m not angry at all.
I jz think that how dark is ur world with so many doubts.
I jz try to pull out u from the darkness.
But now I will give up to pull out u.
May i know that u believe really in these things or u wrote these articles for some sakes?
February 2, 2008 at 2:30 PM
(so many personal attacks! Why do u say no personal attack?)
တကယ်ကို စိတ်လေတယ်ဗျာ။ စာတလုံးမှ မဖတ်ပဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းသူနဲ့ပြောနေရတာကိုး။ ကျနော်ပြောတဲ့ “personal attack ရှိမရှိ အခု comment ကိုပြန်ဖတ်ပါ။ ရှင်းပါတယ်နော်?” ဆိုတဲ့စာပိုဒ်ဟာ အစ်ကိုပြောတဲ့ “I have not made any personal attacks in this comment.” ဆိုတဲ့စာကြောင်းကို ပြန်ထားတာပါခင်ဗျာ။ စာလေးတော့ သေသေချာချာဖတ်ပါဗျာ။
(ur answer is not related with my comment in this paragraph. I just point out the conflict in ur two comments.)
ကျနော်အရင် comment မှာ “ကျနော် BUSH ကို တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးခွင့်ရထားတဲ့ သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တချက်လောက် သတိထားပါ။ အမေရိကန်တရားရုံးတောင် lacy peterson ကိစ္စမှာ ဘာကြောင့် သတ်လဲဆိုတဲ့ အဖြေတောင် မသိပဲ သူ့ယောကျားကို သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစ်ကို အဖေတော်ထားတဲ့ တရားသူကြီးတွေထက်တော့ ကျနော်ကတော်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ချပါ” အစ်ကို သေသေချာချာ မဖတ်ပဲ နအဖ လူလေး မပြောစလောက်သတ်တဲ့ ဘက်ကို ဆွဲလာလို့ ပြောလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ စာကို သေသေချာချာဖတ်ပါခင်ဗျာ
(It isajoke. When the other reasons can't be found, should it be concluded that this is because of nature? U should know that human have not known all the secrets of nature. e.g. people can't know when they encounter the earthquake.)
ဟားဟား တကယ်ကို၇ယ်ရတယ်။ ဦးနောက် တကယ်ကို မသုံးရှာဘူး။ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမိ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာကို တင်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ ဆူနာမိ ဖြစ်တဲ့ သမိုင်းလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပြီး အခုငလျင်က တခါပဲလှုပ်ပြီး တိုင်းတာချက်တွေက ၄ ကြိမ်လုံးလုံးပြောင်းထွက်နေတဲ့ အကြောင်း၊ သတင်းဌာနတွေ ငလျင်တိုင်းတာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မှာ မဝေဖန်တဲ့ အကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးငလျင်ကြီးလို့လဲ နာမည်တပ်ထားပြီး တိုက်အိမ်တွေပြိုလဲတာလဲ မရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကို တချက်လေးမှ ထည့်မတွက်ပဲ သဘာဝကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ မျက်ကန်းယုံတာ မလွန်ဘူးလားခင်ဗျာ?
(I m not angry at all.)
(I jz think that how dark is ur world with so many doubts.)
ကျနော်ပြောတာကို မယုံရင် Professor ဆောင်းပါးလဲရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေ အကိုးအကားတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ ဖတ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာ
(I jz try to pull out u from the darkness.
May i know that u believe really in these things or u wrote these articles for some sakes?)
ကျနော်ဘာအကြောင်းကြောင့်ရေးတယ်ဆိုတာထက် အစ်ကိုက ဘာကြောင့် အမေရိကန်ကို အဲလောက် ကာကွယ်နေလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆိုက်ဝါးဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာပဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားမိပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Ko Zaw Myo,
I have readafew of yr posts and found them singularly one sided or shall we say blind sided.
Here is one of yr repeated comment "နအဖ လူလေး မ ဖြစ်စလောက်သတ်တဲ့ ဘက်ကို", how can u be so belittling the deaths of the people struggling for the liberty of the countrymen? Shame on u. This shows yr true character as na-ah-pha's hench man.
February 2, 2008 at 10:34 PM
သူများကို လက်ညှိးတချောင်းထိုးရင် လေးချောင်းပြန်ထိုးတာ ခံရတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ တကယ်တမ်းရှက်ရမှာ ဘယ်သူတွေလဲခင်ဗျာ။ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ပြန်စဉ်းစားပါ။ လူသတ်တာကို ကျနော် ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ အစိုးရတိုင်း လူသတ်တာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အစ်မတို့က နအဖ လူသတ်တာကိုပဲ အမျိုးမျိုးလှည့်ပြောနေပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရ သူ့တိုင်းပြည် အေးချမ်းနေတဲ့အချိန် 9/11 မှာ သတ်တာ ခြောက်ထောင်ကျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖလို သူ့ကို တရားစွဲပြီး ကြိုးစင်တင်ဖို့ ကြိုးစားသူတွေကိုသတ်တာ တစ်ရာတောင် မပြည့်ပါဘူး။ အမေရိကန်အစိုးရ သတ်တဲ့ပြည်သူတွေဟာ ရုံးသွား ရုံးပြန်လုပ်နေတဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီလူတွေမှာ ဘယ်သူမှ BUSH ကို ကြိုးစင်တင်ချင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မပါပါဘူး။ အစ်မ အချိန်ရရင် ဘာကြောင့် ငါ့ဘက် လက်လေးချောင်းပြန်ထိုးနေလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလိုပါဦးခင်ဗျာ။
February 2, 2008 at 10:56 PM
I see. U r saying that 100 countrymen killed by na-ah-pha is nothing. U want thousands to be killed. That happened in 1988 when approx 3000 were killed. I suppose u want or naahpha wants another uprising and will kill 5000. Is that what u want?? U sadist.
U r duped by conspiracy theorists on
9/11 attack fabricated by Islamists. It is definitely the Islamist who did it and confessed by Bin Laden and Khalid Sheik Mohamad. Why do u blindly write all these nonsense? everybody in their RIGHT MIND knows what happened. BTW, I am not trying to defend US, I am just disgusted with the Islamists attack on civilization.
February 2, 2008 at 11:11 PM
အစ်မစိန်ဟာ တကယ်ကိုရယ်ရတယ်ဗျာ။ အစ်မရေအစ်မက တကယ်လူတွေအသက်ကို သနားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဟန်ဆောင်ပြောနေတာ သိသာပါတယ်။ အခုနအဖလက်ထက်မှာ လူတစ်ထောင်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီလက်ထက် မှာ လူငါးထောင်ကို သတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို အစ်မယုံပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပေါ်ယံပဲ လူအသက်ကို နှမြောပြတာပါ။ (အစ်မလိုပေါ့)
နောက်ပြီး အစ်မကိုတော့ ပြတိုက်ထဲ မှန်ပုံးကြည်ကြည်လေးထဲမှာ ထည့်ထားပြီး ပြသထား သင့်တယ်။ အမေရိကန်အစိုးရ လိမ်လို့အလွယ်ဆုံးသူ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့။ ဒါနဲ့ ဘယ်လိုကြောင့် မွတ်ဆလင်တွေလုပ်တယ်ထင်သလဲ? တချက်လောက်ပြောပြပါဦး။ BBC ပြောလို့လား? BBC ကတော့ 9/11 မှာ CIA ပေးတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ပေးတယ်ဆိုပြီး နာမည်ပျက်သွားတဲ့ အကြောင်းကြားမိလား? အဲဒီအကြောင်းအစ်မ မသိဘူးမဟုတ်လား? ဘယ်သိမလဲဗျာ။ လေ့လာလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ။ ပြတိုက်ထဲမရောက်ခင်ပေါ့.
U said that u don't know the reason why US killed so many people. U should know that the reasons of killing people by governments are v evident. I can know the reason why SPDC killed the people without asking Than Shwe. Similarly, I can know the reasons why another countries or islamists kill the people without asking their leaders in most cases. So u should try to find the reasons why US killed so many people in tsunami and 9/11 without asking BUSH.
And U should know that i m defending the writing articles that are impossible and not for US. If u say that Russia and China made tsunami or kill many people without the evident reasons, I cannot also believe and will defend for these countries.
U said that i should read carefully. But i suppose that u should write more clearly. The word u write like "အခု comment" should mean the most recent comment. And the word "this comment" also mean the most recent comment.
In conclusion, as I said in my first comment, if u deeply believe these things, why don't u want to publish in Myanmar media such as SPDC's newspapers? Ur articles can promote these newspaper. U have said that u love the Myanmar and if so, u should try to know all Myanmar about these important things. U can also get many opinions.
I m looking forward to read ur articles in some myanmar newspapers or journals.
Why are U stonewalling and not understanding my comments. It is very easy, even KG students understands (younger than first standard). I told U that Bin Laden himself and KSM have confessed to the attack on the WTC. They are the top Al Kaeda. Do U want hem to come to U and explain.
Why do U keep saying that democracy governments kill their own people. U must be raving mad - man! What do U do in Toronto? Do you sustain yourself with dole money from the democratic Canada government and people. Aren't U ashamed of yourself living on the money from the country that feeds you and u keep insulting them. Thayay paw eit thayay nar sar.
I hope U come to see daylight and write for the free people of Burma.
February 3, 2008 at 12:47 AM
သွားတော့မယ်ဆို? အစ်ကိုကတော့ တကယ်ကိုတုံးတယ်ဗျာ။ lacy peterson ကိစ္စလိုမျိုးအနေအထားမှာတောင် အစ်ကိုအဖေ အမေရိကန် တရားသူကြီးတွေ ဘာကြောင့်သတ်လဲမသိပဲ ယောကျားဖြစ်သူကို သေဒဏ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ အစ်ကို နအဖ ကိစ္စမှာ အစ်ကိုယ်တိုင်မှန်တယ်ထင်နေတာပါ။ islamists က ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ? အဖေကြီးအမေရိကန်အတွက် အခုထက်ထိ လက်မလျှော့ပဲကာကွယ်နေတုံးလား? ပြီးတော့ အစ်ကို့လို ခေါင်းမသုံးပဲ မစဉ်းစားပဲ ဆူနာမိဘယ်တုံးကမှ မရှိခဲ့တဲ့နေရာကို သဘာဝကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့။ ဒါတောင် သိပ္မံကပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် သဘာဝနဲ့ ဆူနာမိနဲ့ ဆက်စပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုနေ သူကများ သဘာဝကြောင့်တဲ့ ။ ဟားဟား ကဲကဲ အဖေကြီးအတွက် ဘယ်လိုကာကွယ်ဦးမှာလဲ?
သူခိုးက လူကို ဟစ်တယ်ဆိုတာ မျိုးဖြစ်နေပြီဗျ။ CNN သတင်းကြည့်တာ သိပ်များသွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဆိုက်ဝါးထဲကောင်းကောင်းမိထားတယ်။ ဘင်လာဒင်က သူကိုယ်တိုင် ငြင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်မှာ ၀န်ခံထားတာရှိလဲ? သြေ်သိပြီ။ CIA လုပ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုအတုထဲက ဘင်လာဒင်အတုကြီး Twin Tower ပြိုကျသွားတာကို ကျေနပ်နေတာကို ကြည့်ပြီးပြောတာလားဗျ? ကဲဗျာ ဆရာမကြီးအထာနဲ့ ဟောက်ချင်တယ်ဆိုရင် နည်းနည်းလေး လေ့လာပါဦး။ ကျနော်က အဲလိုမျိုး အမေရိကန်အစိုးရ ပြောသမျှ မစဉ်းစားပဲ လိုက်ပြောတဲ့သူကို မြင်ရင် အရမ်းရယ်ချင်တယ်ဗျ။
The standards of ur comments become lower and lower with more and more personal attacks.
U should read carefully my comment. I wrote "the reasons of killing people by GOVERNMENTS are v evident". This mean killing many people by governments
And do u not accept the main reason of SPDC's killing people is to maintain their power?
Pls reply that related with my comments with high standard.
February 3, 2008 at 1:41 AM
အစ်ကိုတို့လူတွေက တကယ်ကိုရယ်ရတယ်။ ပထမဆုံးစကတည်းက အစ်ကိုကျနော့ကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ မနိုင်တော့မှ သူတော်ကောင်း လေသံလွှင့်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုး မရိုးသားတဲ့ အောက်တန်းစားအကျင့်ကို အရင်ဖျောက်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ မဆဲပေမယ့် အားနာတဲ့အမျိုးအစားတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဦးနောက်တစက်မှ မရှိတဲ့ အစ်ကိုလို လူမျိုး အတင်းပဲပြောတတ်တဲ့ ဘလော့အားလုံးကို ကျနော်တို့ အဓိကထိမ်းထားတာသိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာ? ကဲ . . . နအဖ လူတွေကို ဘာကြောင့်သတ်လဲ ဆိုတာ သူ့အဏာအတွက်လို့ တစ်ခုတည်းလို့ အစ်ကိုထင်နေတယ် မဟုတ်လား? အဲဒါတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင် အစ်ကိုဟာ အတွေးအခေါ် အရမ်းကိုနည်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆူနာမိ တကြိမ်တခါမှ မရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာ သဘာဝ ကြောင့်လို့ထင်တဲ့ ဥာဏ်အဆင့်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ အစ်မစိန်လည်းပျောက်သွားရှာပီ။ CIA video အတုကြီးနဲ့ ခေါင်းချာချာလည်သွားပြီထင်ပါတယ်
February 3, 2008 at 9:30 AM
Ha Ha! Now, I know that u cannot read and understand well english. Request somebody to translate well my comments.
I wrote "the MAIN reason of SPDC's killing people is to maintain their power".
And u say
နအဖ လူတွေကို ဘာကြောင့်သတ်လဲ ဆိုတာ သူ့အဏာအတွက်လို့ "တစ်ခုတည်း"လို့ အစ်ကိုထင်နေတယ် မဟုတ်လား?
အမေရိကန် အဖေကြီးကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့လို့ အဆံချောင်သွားပြီလားခင်ဗျာ။ စိတ်ကိုထိမ်းပါခင်ဗျာ။ ဆူနာမိ တခါမှ မဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေသမှာ၊ 8.7 မြေငလျင်ကြီးလှုပ်ခဲ့တာတောင် ဆူနာမိမဖြစ်တဲ့ ဒေသကြီးမှာ ၊ သတင်းဌာနတွေစကားကို အမျိုးမျိုးပြောင်းကြေငြာပေးနေတာတောင် သဘောမပေါက်ပဲ သဘာဝကြောင့် ဆူနာမိဖြစ်တယ်လို့ ထင်တဲ့သူထက်တော့ ဘယ်သူမဆို စဉ်းစားဥာဏ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီးပြောရဦးမယ် အစ်ကိုအဖေ အမေရိကန် တရားသူကြီးတွေလို ကျနော်သာ BUSH ကိုမေးချင်တိုင်း မေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် . . . . . lacy peterson ရဲ့ ယောကျားလို အပြစ်မဲ့သူကို သေဒဏ်ပေးသလိုမျိုး မဖြစ်နိုင်သလို၊ BUSH လို လူသတ်တရားခံကြီး ကိုလည်း ကြိုးစင်ပေါ်မှာ လုံးဝ သေဒဏ်ပေးခံရအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံပါခင်ဗျာ။
February 3, 2008 at 3:35 PM
Sein Kyauk said...
Let me correct U that I m not yr elder sister. I am Sein Kyauk = တောင်းကိုမဖေါက်-တောင်ကိုဖေါက်၊စိန်ကျောက်
U r getting more ridiculous with each post. U did not answer how u r living in Toronto. I know who u r. U don’t know me.
Now getting back to the subject, Bin Laden admitted the attack on Al Jazeera,
"Osama bin Laden speaks in this image made from an undated video broadcast on Friday, Oct. 29, 2004 by Arab television station Al-Jazeera. In the statement, bin Laden directly admitted for the first time that he carried out the Sept. 11 attacks, and said 'the best way to avoid another Manhattan' was to stop threatening Muslims' security. Al-Jazeera, based in Qatar, did not say how it had received the tape"
R u going to say that the democratic Spanish gov killed their own people in the Madrid bombings and the Indonesian gov killed the tourists in the Bali bombings? I give up on .
U must be deluded that US gov killed their own people. Wake up. U should look at what our Burmese army gov has done to their own people. Killing over 100 and U r still not satisfied. U think naapha is preserving their thick skin. No, not only that they are madly after the ill gotten wealth and power. If not for the arms they carry, which BTW, are purchased with the hard earned money of the civilian Burmese people like me, they would not be able to buy them. This is what rankled me most. They are killing with the arms obtained with MY MONEY.
Back to Tsunami. The earth quake is in the middle of no where - deep, very deep in the ocean. It does not happen on land and therefore no fatalities on land due to earthquake. The San Francisco Earthquake happened right on the San Andreas fault which is directly under SF and thereforealot of fatalities. The same holds for the Kobe earthquake where the epicenter is CLOSE to Kobe. There are many many earthquakes in the Sea of Japan which does not do any harm on land. Pls read more before U blindly copy and paste (son of copy Suu Kyi) . Another point, to produce an earth quake of 9.1 Richter scale U may need perhapsathousand or more mega hydrogen bombs. Do U know how much the power of an earth quake is? U better study before u write rubbish stuff. U know the difference betweenaRichter5quake anda6 or7or 8 or9quake. Each increase is in order of magnitude not onalinear scale. And u know whatamagnitude is coz u r or was an engineer, I know.
I implore u to be more realistic and give up yr job of attack dog for naapha. Come out of the dark and see the light of Burma.
February 3, 2008 at 7:02 PM
ကို Sein Kyauk
(U r getting more ridiculous with each post. U did not answer how u r living in Toronto. I know who u r. U don’t know me.
Now getting back to the subject, Bin Laden admitted the attack on Al Jazeera,)
အဲဒီစာပိုဒ်က ဆူနာမိကိစ္စနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အဲလောက် မအူသင့်ပါခင်ဗျာ။
ဘင်လာဒင်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်။ ကျနော်သိတာ CIA လုပ်တဲ့ ဗီဒီယို အတုကြီးပဲ သိပါတယ်။ အစ်ကိုဗီဒီယို Link လေး ပေးကြည့်ပါခင်ဗျာ။ (Link မရှိဘူးဆိုပြီး လိမ်ညာဖို့ မကြိုးစားနဲ့နော်) နောက်ပြီး ဘင်လာဒင်ကိုတိုင် ငြင်းဆိုတာလည်း အစ်ကိုရှာကြည့်ပါ။ အစ်မစိန်လဲ အရှက်ကွဲသွားပါပြီခင်ဗျာ။ အဲလောက်ပဲ ကျနော်ပြောပါမယ်။ (စိန်နှစ်လုံးကို ပြတိုက်ထဲက မှန်ပုံးကြည်ကြည်လေးထဲမှာ လိမ်လို့ အလွယ်ဆုံးလူနှစ်ယောက်ဆိုပြီး စာတန်းလေးနဲ့ ပြသထားပါမယ်)
မြေငလျင်ကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ သေသေချာချာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ “to produce an earth quake of 9.1 Richter scale U may need perhapsathousand or more mega hydrogen bombs” ဆိုတဲ့စာကြောင်းတွေ့တော့ အစ်ကိုဟာ စာသေသေချာချာ မဖတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားမိပါတယ်။ (အဲလောက်ညံ့ရင် ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်နေရာမှာ အစားထိုးခေါင်းဆောင်လုပ်နိုင်ပါပြီ) စာကိုပြန်ဖတ်ပါ။ အမေရိကန် ကိန်းဂဏန်းတွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးပြောနေတာ နောက်ဆုံးပြောချက်က 9.3 ပါ။ ကျနော့စာမှာ 9.3 ငလျင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကျနော်မထင်ကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်။ အစ်ကိုအနေနဲ့9အထက် မြေငလျင်တွေ ဘယ်လောက် အကွာအဝေးအထိ ပျက်စီးစေလဲ တချက်လေ့လာပါခင်ဗျာ။ (ကိုးကားချက်တွေ မှာပါနေပါတယ်)။ နောက်ပြီး စကားပြောရင် ဗဟိုအမှတ် (Epicenter) အတိအကျ ယှဉ်ပြီးဖေါ်ပြပါ။ no where တွေ very deep တွေနဲ့ လာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အရှက်ခွဲတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ မြေင်ငလျင်ကြီးဖြစ်တဲ့ 9.3 နဲ့ 8.7 လပိုင်းပဲခြားပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ ထူးခြားချက် တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ လိုက်မှီမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဖေကြီးအမေရိကန်အတွက် ကာကွယ်ရင်းအရှက်ကွဲခံနိုင်တာ လေးစားပါတယ်။
February 4, 2008 at 5:41 PM
Look, it doesn't matter if the quake is 9.1 or 9.3 or even 9.5 Richter scale. What u have to bear in mind is that no single nuclear bomb can produce even an 8 rischter scale quake. U r just hopeless. The quake can not topple buildings in Indonesia as it is far from the shore. Pls. be more realistic. I have said that many quakes in Sea of Japan do not produce any damage on shore. I don't want to go into details on exactly where the earthquake oringinated. Ask the scientist if u must.
As to UBL's statement on the 9/11 attack u better contact Al Jazeera for details. They are the source.
(Look, it doesn't matter if the quake is 9.1 or 9.3 or even 9.5 Richter scale)
9.5 နဲ့ 9.1 ဟာ အင်အား ၄ဆ ကွာပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုက ဘယ်လိုကြောင့် doesn't matter ပြောနေတာလဲ? 0.4 ဆိုတာ ဂဏန်းသေးပေမယ့် လျှော့မတွက်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ အထင်ကြီး အနောက်ဖက် သတင်းစာ Link လေးပေးမလို့ပဲဗျ။ ဘယ်ဟာမှ တူတူတန်တန် ကိုးကားလို့ရတာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အာရှ သတင်းစာဖြစ်တဲ့ Pakistan Daily Times က Link လေးပဲပြန်ဖတ်ပါ။
(What u have to bear in mind is that no single nuclear bomb can produce even an 8 rischter scale quake.)
အစ်ကိုရေ Nuclear နဲ့ 8 rischter scale မြေငလျင်လှုပ်အောင်လုပ်တယ်လို့ ကျနော်မပြောပါဘူး။ အစ်ကို ကျနော့စာကို ပြန်ဖတ်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်ပြောတာNuclearနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာ 6.4 လေးပါ။ အဲဒီ 6.4 ဆိုတာ အမေရိကန်ကြေငြာတဲ့ 9.3 ထက် အဆပေါင်း (၃၀) လျော့နည်းပါတယ်။ အဆ 30 ဆိုတာ အများကြီးကွာပါတယ်။
( Pls. be more realistic. I have said that many quakes in Sea of Japan do not produce any damage on shore. I don't want to go into details on exactly where the earthquake oringinated.)
ဂျပန်ပင်လယ်ထဲမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွေက အင်အားဘယ်လောက်လဲ? Epicenter က ကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်တွေသိမှ လက်တွေ့ကျကျ ဆွေးနွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲမှာလှုပ်လို့ အိမ်တွေမပြိုဘူးဆိုပြီး အတိအကျပြောလို့မရပါခင်ဗျာ။ မြေငလျင် rischter scale6အောက်ဆိုရင်တော့ ကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့နီးလဲ ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အပျက်အစီးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
(As to UBL's statement on the 9/11 attack u better contact Al Jazeera for details. They are the source.)
ဟုတ်မှ မဟုတ်တာ သိနေပြီပဲ။ အချိန်ကုန်ခံပြီး မမေးတော့ပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုဘယ်ဆောင်းပါးကို ဘယ်က Quote လုပ်ထားလဲတော့မသိပါ။ Friday, Oct. 29, 2004 ဆိုပြီးအတိအကျရက်စွဲကြီးပါနေပါတယ်။ ကျနော်ပြောပြပါမယ် အစ်ကိုနားထောင်ပါခင်ဗျာ။ ပထမပိုင်းမှာ အမေရိကန်ဟာ ဘင်လာဒင်ဗီဒီယိုအတုနဲ့ လူတွေကို လိမ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ထင်သလောက် CIA က ဥာဏ်မကောင်းဘူးဗျ။ ဗီဒီယိုအတုက အတုကြီးမှန်းသိသာနေပါတယ်။ လူထုအတွင်းမှာ မယုံမကြည်တာတွေများလာတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘင်လာဒင် အသံသွင်းတိတ်ခွေဆိုပြီး အတုလုပ်လာပြန်ပါတယ်။ အဲဒါလဲ အတုဆိုပြီး ပညာရှင်တွေက အော်ကျတော့ အခုဆိုရင် ဘင်လာဒင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအတုလုံးဝ မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဇတ်လမ်းလေးက အဲဒါပါပဲခင်ဗျာ။
Ko Hla's Blog said...
ကိုဇော်မျိုးခင်ဗျာ ကျနော်ကဘလော့ဖတ်တဲ့လူပါ။ ဒီစာကိုဖတ်တော့ မရှင်းတာလေးတွေရှိလို့ပါ။ ကျနော် မေးထားတာက စော်ကားသလိုဖြစ်ပါက ခွင့်လွတ်ပါ။ မြန်မာလိုသိပ်မရိုက်တတ်တော့ တိုတိုရေးတာပါ။
- ကိုဇော်မျိုးပေးတဲ့ siteတွေကအားလုံးအမှန်ရေးတယ်လို့ထင်ပါသလား
- ကျနော်ဖတ်ကြည့်တော့အများစုက မတိမကျပဲဝေဖန်ထားပါတယ်။ ဖတ်မိတာတော့ ငလျင်လှုပ်ပုံမတူလို့အချို့က ဆူနာမိဖြစ်ပြီး အချို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့
- မြန်မာနိုင်ငံမှာဆူနာမိကြောင့် ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲရေးထာ ပိုမကောင်းဘူးလား။ ဘယ်သူမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်
- အမေရိကန်လုပ်တယ်ဆို တခြားလူတွေက တရားဝင်ပြောမယ်ထင်တယ်။ တကယ်လုပ်တယ်ဆို အမေရိကန်ကိုဆန့်ကျင်ပါတယ်
- ဒီဟာကို အမေရိကန်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးက မြန်မာပြည်အတွက် အရေးမကြီးထင်တယ်။
- အမေရိကန်အစိုးရကို မပြစ်မပြောဖုို့ တခြားနိုင်ငံတွေကိုချိန်းခြောက်တယ်ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှအကြိုးမရှိလို့ပဲထင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ကြိုးစားပြီးရေးလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
February 6, 2008 at 5:13 AM
(ကိုဇော်မျိုးခင်ဗျာ ကျနော်ကဘလော့ဖတ်တဲ့လူပါ။ ဒီစာကိုဖတ်တော့ မရှင်းတာလေးတွေရှိလို့ပါ။ ကျနော် မေးထားတာက စော်ကားသလိုဖြစ်ပါက ခွင့်လွတ်ပါ။ မြန်မာလိုသိပ်မရိုက်တတ်တော့ တိုတိုရေးတာပါ။)
ကျနော်တို့ ဘလော့ဖတ်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ထည့်ပြောစရာ မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ တခြားအတင်းပြောဘလော့တွေလို ဘာပြောလဲဆိုတာထက် ဘယ်သူပြောလဲဆိုတာကို အလေးထားတဲ့ ဘလော့မဟုတ်ပါ။ အားလုံးကို တန်းတူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို မဆိုကြိုဆိုပါတယ်
ကျနော်ပေးတဲ့ ဆိုက်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဆိုက်မဆို အကုန်မှားတယ်မရှိသလို အကုန်မှန်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင် ရှည်ရှည်ဝေးေးရှင်းပြဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
( ကျနော်ဖတ်ကြည့်တော့အများစုက မတိမကျပဲဝေဖန်ထားပါတယ်။ ဖတ်မိတာတော့ ငလျင်လှုပ်ပုံမတူလို့အချို့က ဆူနာမိဖြစ်ပြီး အချို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့)
ဘယ်နေရာမှာ မတိကျလို့လဲခင်ဗျာ? ရုပ်ပုံတွေနဲ့ သူတို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ အစ်ကိုက သေသေချာချာ မဖတ်ရဲလို့ဖြစ်ပလိမ့်မယ်။ အစ်ကိုအနေနဲ့ မြေငလျင်လှုပ်တိုင်း ဆူနာမိဖြစ်တယ်လို့ တရားသေမှတ်ထားလို့လားခင်ဗျာ? ဒါဆိုရင် 8.7 လိုမြေငလျင်ကြီး ဖြစ်တုံးက ဆူနာမိဘာကြောင့်မဖြစ်လဲ? ဆူနာမိ သူ့ဖာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ လူပိန်းစကားနဲ့တော့ မငြင်းပါနဲ့ဗျာ။
( မြန်မာနိုင်ငံမှာဆူနာမိကြောင့် ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲရေးထာ ပိုမကောင်းဘူးလား။ ဘယ်သူမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်)
အဲဒီမေးခွန်းကို ကျနော် မဖြေတော့ပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုမေးတာ လုံးဝ မရိုးသားဘူးဆိုတာ အစ်ကိုအသိဆုံးပါ
( အမေရိကန်လုပ်တယ်ဆို တခြားလူတွေက တရားဝင်ပြောမယ်ထင်တယ်။ )
အစ်ကိုတို့ဟာ သတင်းစာတွေ ဆိုက်ဝါးလုပ်ထားတာကို အခုထက်ထိ သတိမထားမိသေးဘူးနော်? လက်တွေ့ကျကျ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိအောင်အရင်လေ့လာရင် အဲဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေရလာပါမယ်ခင်ဗျာ
အစ်ကိုအနေနဲ့ BBC က သတင်းထုတ်ပြန်မှ အမေရိကန်တကယ်လုပ်တယ်ထင်မှာလား? အစ်ကိုအနေနဲ့ ဦးနောက်နဲ့တွေးပြီး လက်မခံနိုင်တာရှိသေးလား? အထောက်အထားပေးထားတဲ့ စာတွေကို သေသေခြာခြာဖတ်ပါခင်ဗျာ။ သူတို့မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အစ်ကိုလည်းကြိုးစားဖြေပေးပါ။ ကျနော်မေးထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အစ်ကိုဖြေကြည့်ပြီးပြီလား? တခြားနိုင်ငံတွေ ပါးစပ်ပိတ်နေလို့ မယုံဘူးလို့ပြောရင် အစ်ကိုမှာရှိတဲ့ ဦးနောက်ဟာ တကယ်ကို အလကားဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ
( ဒီဟာကို အမေရိကန်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးက မြန်မာပြည်အတွက် အရေးမကြီးထင်တယ်။)
ထုံးဆန်အတိုင်းပဲ အမေရိကန်ကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒကြီးရဲ့ သိက္ခာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဝါဒကြီးအတွက် နအဖကိုပဲ အတင်းပဲထိုင်ပြောပါ။ အဲလိုဖြစ်စေချင်တာ မဟုတ်လား?
( အမေရိကန်အစိုးရကို မပြစ်မပြောဖုို့ တခြားနိုင်ငံတွေကိုချိန်းခြောက်တယ်ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး)
အစ်ကိုအနေနဲ့ ဘလော့မှာရေးထားတဲ့ ကြောင်းကျိုးပြချက်တွေကို ချေပသင့်ပါတယ်။ ပြီးမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောသင့်တာပေါ့။ ဘာမှ ကြောင်းကျိုးမရှိပဲ စွပ်ပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ပြောတော့ ကျနော်က ဘလော့ထဲက အကြောင်းတွေကို ထပ်ရှင်းပြရမလိုဖြစ်နေပြီဗျ။ ကြည့်ကျက်လုပ်ပါဦးဗျာ။
(ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှအကြိုးမရှိလို့ပဲထင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ကြိုးစားပြီးရေးလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်)
တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရေးအသားဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲ? အမေရိကန်ကို အဖေတစ်ယောက်လို ထင်မြင်အောင်ရေးတဲ့ အရေးအသားလား? မိမိကိုယ်ကို သနားစရာ သတ္တ၀ါလေးတွေလို မြင်အောင်ရေးတဲ့ အရေးအသားလား? အရေမရ အဖတ်မရ နအဖကိုပဲ အတင်းပြောနေတဲ့ အရေးအသားလား? တချက်လောက်ရှင်းပြပါခင်ဗျာ
February 6, 2008 at 5:10 PM
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျနော်တို့မသိတဲ့ .. မတွေးမိတဲ့ အချက်တွေ သိရတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေတော့ ကျနော် သိပ်မသိတော့ မဆွေးနွေးချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတွေအကြောင်း နဲနဲ ပြောချင်ပါတယ်။ USS Bonhomme Richard ဟာ သူ့တစ်စင်းထဲအတွက် သင်္ဘော အဖွဲ့သား Crew 3448 ယောက် ရှိပါတယ်။ တန်ပေါင်း 27100 လေးပါတယ်။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ သင်္ဘောကြီးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ သင်္ဘောသား 500 လောက်နဲ့ အလုပ်မလုပ် နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ စာရင်းထဲက ထုတ်ပြီးပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/ships/carriers/histories/cv31-bhrichard/cv31-bhrichard.html မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ USS Abraham Lincoln ကလည်း သေးတဲ့ သင်္ဘောမဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့ကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ သင်္ဘောသား ၅၀၀ နဲ့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဒီသင်္ဘောကြီးတွေက သူ့အတွက် အချွေအရံ သင်္ဘောတွေနဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားတာပါ။
ဆူနာမီ ကာလမှာ ဒီသင်္ဘောကြီးတွေ ဘယ်မှာရှိတယ် မရှိဘူး ၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတယ် ဆိုတာတွေ ကျနော် မဆွေးနွေးချင်ပါဘူး။ အကို တောသားများ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ပြီး ကျန်ခဲ့တာကို ထောက်ပြတာပါ။
အစ်ကိုအနေနဲ့ တမိနစ်လောက် အချိန်ပေးစဉ်းစားရင် မေးထားတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာတွေ အဲလောက် မညံ့ဘူးဆိုတာ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။7စက္ကန့်လေးပဲ ရှိပြီး ဘယ်နေရာမှာသေနေတဲ့ ဘုန်းကြီးအလောင်းမှန်းမသိပဲ မြန်မာစစ်သားတွေ သတ်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကျတော့ မစဉ်းစားပဲ လက်ခံကျပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာ အကိုးအကားတွေ၊ အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြထားပေမယ့် အမေရိကန်ကြီးအတွက် တတ်စွမ်းတရွေ့ကာကွယ်ပေးရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ အများကြီး ချီးကျူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ သိက္ခာကို ကယ်တင်ဖို့ အစ်ကို့မေးခွန်းကို ဖျက်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘာသာရေးဆောင်းပါးအသစ်အတွက်စာဖတ်ချိန်၊ ကျောင်းစာတွေနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ် နေပါတယ်။ ၃-၄ ပတ်အထိ ဆက်မြင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ မလွဲမရှောင်သာပဲ မြန်မာလူမျိုးတွေ သိက္ခာကို ချရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ စဉ်းစားပါခင်ဗျာ
Ko leo said...
Its funny, you want to delete the question because you cannot counter aruge it.
Dont beachicken my bonny boy.
အကို တောသားများ ..
ကျနော် အမေရိကန်ကို ဖအေ မခေါ်သလို .. ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆရာမတင်ပါဘူးဗျာ
ကျနော်ရေးထားတဲ့အထဲမှာ ဘုန်ကြီးအလောင်း မပါသလို ဗမာ စစ်သားလည်း မပါဘူး။
ခင်ဗျားတို့ မှားနေတာကို ထောက်ပြရုံပဲရှိတယ်။
ကျနော် ရေးတာကလည်း အထောက်အထား တစ်ခုကို ချပြတာလေ။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကိုမှ ကာကွယ်နေတာ မဟုတ်ဘူး..။ ခင်ဗျားရေးထားတာ မှန်တယ်ထင်ရင် အထောက်အထား ပြန်ပြပေါ့ဗျ..။
ခင်ဗျား မှားနေတာကို မထောက်စေချင်ရင် အစတည်းက မှန်အောင်ရေးပေါ့ဗျာ...။
February 10, 2008 at 11:42 PM
အစ်ကိုရေးတဲ့အထဲမှာ ဘုန်းကြီးအလောင်းကိစ္စ ပါတယ်လို့မပြောပါဘူးခင်ဗျာ။ အစ်ကိုအနေနဲ့ ကို့လူမျိုးသိက္ခာကျမယ့် သတင်းအမှားကိုတော့ ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့ မကြိုးစားပဲ အမေရိကန်ရဲ့ မရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ စာကို ပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အစ်ကိုဟာ တောသားနှစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာကိုတမျိုးမြင်နေဟန်တူပါတယ်။ ကျနော်တို့မှားနေတာကို ထောက်ပြတယ်လို့ ဘာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အထင်သိပ်ကြီးနေတာလဲ? ကျနော်တို့ပြောထားပါတယ်။ တမိနစ်ခွဲလောက် အချိန်ပေးစဉ်းစားလိုက်ရင် အစ်ကိုမေးထားတဲ့ မေးခွန်းက သူငယ်တန်းကျောင်းသား အဆင့်တောင် မရှိဘူးဆိုတာ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ အခုချိန်မှာ ဘာသာရေးဆောင်းပါးလေးကို ရေးနေချိန်မို့ အဖြေကို မပေးသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
အခုချက်ချင်း အဖြေပေးလိုက်ရင် အစ်ကို့ အရှက်ခွဲတာနဲ့ အတူတူဖြစ်နေမှာမို့ပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုဟာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း မြန်မာတွေအားလုံး အရှက်ခွဲခံရသလိုမျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နောက်ထပ် ၂ ပတ်လောက်အတွင်းမှာ အစ်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းကို ဖျက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
February 11, 2008 at 11:19 AM
ဘာသာရေး ဆောင်းပါးရေးနေချိန်မှာ နှောင့်ယှက်သလို ဖြစ်သွားရင် ဆောရီးပါ။
ကြိုပြောထားမယ်နော် .. ကျနော် အမေရိကန်ကို ထောက်ခံတဲ့ အားပေးတဲ့ အထဲမှာ မပါဘူး .။
အကိုရေးတဲ့အထဲမှာ "ကျနော်တို့မှားနေတာကို ထောက်ပြတယ်လို့ ဘာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အထင်သိပ်ကြီးနေတာလဲ? " လို့ ပါတယ်နော်..။
အကိုရေးထားတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ ပြောထားတဲ့ " ကယ်ဆယ်ရေး လွတ်လိုက်တာ USS Abraham Lincoln နဲ့ USS Bonhomme Richard (အပေါ်ကပုံကို Click လုပ်ကြည့်ပါ) အမည်ရတဲ့ လေယဉ်တင်သဘောင်္အုပ်စုကြီး နှစ်စုကို ကယ်ဆယ်ရေးအမည်နဲ့ လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ " ဆိုတာကို စဉ်းစားရအောင်.။
အကိုတို့ပြောတဲ့ USS Bonhomme Richard ဆိုတဲ့ သင်္ဘောကြီးကို အမေရိကန်ရေတပ်က ၁၉၇၁ ခုနှစ်က အနားပေးလိုက်ပြီး .၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ သံတိုသံစ အနေနဲ့ ရောင်းလိုက်ပြီးပြီဗျ..။
နောက်ပြီး USS Abraham Lincoln ဆိုတဲ့ သင်္ဘောကြီးက သူ့ရဲ့ သင်္ဘောသားချည်းပဲ ၃၂၀၀ ရှိတယ်။ သူ့မှာ ပါတဲ့ လေယာဉ်တွေအတွက် Crew က ၂၄၈၀ ရှိတယ်။ အကိုပြောတဲ့ စစ်သား ၂၀၀၀ ကျော်တယ်ဆိုတာ သူ့အတွက်တော့ နဲတောင် နဲနေအုံးမယ်။ သူ့တစ်စီးတည်းမှာပဲ လေယာဉ်နဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ပေါင်း ၉၀ တင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လေယာဉ်တင် သင်္ဘောရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့အတွက် တိုက်သင်္ဘောတွေ၊ ဖျက်သင်္ဘောတွေ၊ ဖရီးဂိတ်တွေ ၊ ရေငုတ်သင်္ဘောတွေလည်း ဘယ်သွားသွား ပါမှာပဲဗျ။
USS Abraham Lincoln ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Abraham_Lincoln_(CVN-72) မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့ဗျာ။ (ဖင်ပိတ်ငြင်းချင်လဲ မကြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာ)
ကျနော် ပြောချင်တာက သူ့ဟာသူ ဘာအတွက်လာတယ်။ ဘယ်ကိုလာတယ်ကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အကိုတို့ မေးထားတဲ့
" (1) အီရတ်မှာ စစ်သားအင်အား အရမ်းလိုနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် USS Abraham Lincoln သဘောင်္ပေါ်မှာ စစ်သား 1,500 အပိုတင်ပြီး Hongkong ကိုသွားနေလဲ?" ဆိုတာကို ရှင်းပြစေချင်တာ။
အကိုတို့အနေနဲ့ သင်္ဘောတွေအကြောင်း သိပ်မသိလို့ မှာသွားတာ ဖြစ်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ တမင် မှားတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျနော် နိုင်ငံရေး သမားမဟုတ်ဘူး။ သာမန် ဘလော့ရေတဲ့ လူတယောက်ပါပဲ။ အရင်တုံးက အကိုတို့ ရေးထားတားတွေ ဖတ်ပြီး (အမှန်အတိုင်းပြောမယ်) အထင်ကြီးခဲ့မိတယ်။
ခုမှ မှားတာကို ပြောပြတာတောင် အတင်းစွတ်ငြင်းနေတော့ ... ... .. ။
ကျနော် ထပ်ပြောပါအုံးမယ် ။ အမေရိကန်ကို ဖအေခေါ်တဲ့ အထဲမှာ ကျနော်မပါပါဘူး ။
"တမိနစ်ခွဲလောက် အချိန်ပေးစဉ်းစားလိုက်ရင် အစ်ကိုမေးထားတဲ့ မေးခွန်းက သူငယ်တန်းကျောင်းသား အဆင့်တောင် မရှိဘူးဆိုတာ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။" ဆိုတာ ဘာကို ပြောမှန်းမသိဘူးဗျာ.. ကျနော်က တော်တော်ညံ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ပထမ comment မှာတည်းက ဘာမေးခွန်းမှ မမေးခဲ့ဘူးဗျ။
ချက်ချင်း အဖြေမပေးနိုင်သေးတာ ရပါတယ်ဗျာ..။
ကျနော်မှားနေရင်လဲ ပြန်ပြောပေါ့. ..။ အေးအေး ဆေးဆေးပါဗျာ.. ။ ကျနော်က ၁၀၉.. ၁၁၀ လေ။
February 12, 2008 at 11:48 PM
အတွေးအခေါ်နဲ့ ဗဟုသုတ ဖြည့်ဆည်းပြီး မေးခွန်းတွေကို မြန်မြန်ပြန်ဖျက်ပေးပါခင်ဗျာ။ မြန်မာလူမျိုး ၁၀၉ - ၁၁၀ တွေ အဲလောက် မညံ့ဘူးဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်ခင်ဗျာ
February 13, 2008 at 12:06 AM
ကဲ အစ်ကိုရေ လေယဉ်တင် သဘောင်္ရှင်းပြစေချင်သေးသလားခင်ဗျာ?
ခင်ဗျားတို့က အမေရိကန်ကို မုန်းပြီး ပြောချင်ရာ ပြောနေတာ ဘာအကျိုးမှလည်း မရှိပါဘူး။ အမှန်ပြောရယင် ခင်ဗျားတို့ပြောတာတွေဟာ ဒီတစ်သက်မှာ ပထမဆုံးကြားရတဲ့ ဟာသပါဘဲ။ ဒီလို ဟာသလေးတွေ တင်ပြလာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။
အူတက်မတတ် ရယ်ရပါတယ်။ ကျေးဇူး
Ok! Very very interesting posting form the Blogger.
Firstly I would like to request to bebate about other countery.
For Our Nation and for out people.
I think you are very admire to your leader. I am standalone.
I admit, I only want to get all of my nationality(Myanmar people) to be happy and joyful in life.
Now do you think all of our people are good in living?
Do you dare to compare to the our country children. Other country's children are eating the good and healthy food and learning the computer in childhood. Our's children in myanmar are do you see.
If you have any relative who is poor family.
Can you go and check?
How do the live and how to eat?
How to learn and how to live?
When i compare about this my tear are come from my eye and my heart are so painful. Because of i love my nation and my people. I want to be all of our people to be the hero as like U Thant(UN Chief).
I think you also want to be hero for our nation. So please thinks clearly. If you are in other country than myanmr. You must know difference between the people live and suffer.
So all of the Democracy people and all of the Army man. Please understand don't attack each other.
Please think of our poor children and our country future.
Now our army government is try their best. But they are not educated person so they don't know how to management the country.
Because General Than Shwe When he come to Singapore at the Embassy. He is very very amazing about the EZ-Link Card. He see and wounder so many times the ez-link card.
Because of he don't know the technology.
Now you(the author) know the technology and if you are the governer of myanmar instead of Than Shwe you can do the better than Than Shwe because of you are international experience and good at Technology and age management.
Don't debate with me.
Please think about my word and Consider for the Country(for our Generation and our country Future)
I wishes to all of our children may be leader for the Asia and world.
January 17, 2009 at 3:35 PM
စာလုံးပေါင်းတွေ တစ်ပုဒ်လုံးပြင်ပြီး ဒီမှာ တင်ပေးတာမရဘူးခင်ဗျ။ ဘယ်ကို ပို့ပေးလို့ရနိုင်ပါသလဲ ... ။
သူများတွေက ဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ရိုင်းစိုင်းတာတွေမပါပါဘူးဗျာ...ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားပြန်ပြောနေတဲ့အထဲမှာတော့ အဖေတော်တယ် အဖေတော်တယ်နဲ့ တော်တော်ကိုရိုင်းစိုင်းလွန်းပါတယ်. ကွန်မန့်တွေကိုကြည့်ရတာတော့ ခင်ဗျားဖြေထားတဲ့ကွန်မန့်တွေကို ကြည့်ရင် သူများတွေ အမေရိကန်ကို အဖေတော်ထားရင် ခင်ဗျားကလဲ နအဖကို အဖေတော်ထားတယ်လို့ ကျိန်းသေယူဆရတော့မယ်ထင်တယ်ဗျ.... အမေရိကန်မှာ အမေရိကန်ကလူတွေကို သတ်တာ သူတို့သမိုင်းလေဗျာ..ကို့နိုင်ငံမှာ ကို့ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်တာ ကို့သမိုင်းဘဲဗျ..သတင်းလိမ်တွေ မသတ်ပါဘူးလို့တော့ စွတ်မငြင်းနဲ့ဗျ..မြန်မာတွေကလဲ ခင်ဗျားပြောသလိုဘဲ သတင်းစာတွေကြီးဘဲဖတ်ပြီး ယုံနေကြတဲ့သူ အနည်းစုဘဲရှိတယ်ဗျ.. မပြောသာလို့သာ ကျိတ်ခံနေကြတဲ့သူတွေကြီးဘဲ...ခင်ဗျားတင်တဲ့ သတင်းက အထောက်အထားလေးကတော့ကောင်းပါတယ်... ဒါသာတကယ်ဆိုရင် တရုတ်တို့ တခြားတိုင်းပြည်တို့က လူတွေက ဘယ်နေပါ့မလဲဗျ..ခင်ဗျားလို မြန်မာနိုင်ငံသား လေးကတောင် သိတယ်လို့ထင်နေသေးတာဗျာ....ဘယ်နိုင်ငံမဆို နည်းပညာထွန်းကားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးဘဲဗျ..တရုတ်တို့ကလဲနေမယ်မထင်ဘူး......အခုအချိန်မှာ တရုတ်က ဘယ်လိုနိုင်ငံဖြစ်နေပြီဆိုတာ ခင်ဗျားလဲသိမှာပါ ...တရုတ်က အမေရိကန်ကို ကြောက်တယ်ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ...
May 28, 2011 at 1:50 AM
ဗုဒ္ဓံ၊ ဓမ္မံ၊ သံဃံ
9/11 နှင့် 7/7 တရားခံ
Bushသည် ရုပ်သေး သမ္မတလေးပါ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာ (အခြေခံ)
ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာ ဖောင်ဒေးရှင်း
ကိုကြောင်ချေးနှင့် ဒီမိုကရေစီသမားတို့ရဲ့ စကားဝိုင်...
“အ” တဲ့သူဖြစ်အောင် သမိုင်းကိုဖတ်ပါ
ကြောက်မက်ဖွယ် ဆူနာမိလူသတ်မှုကြီး (သို့) ကမ္ဘာ့အကြီး...
* ဂုဏ်သရေရှိ BLOGများ *
ကိုကိုကြောင်ချေး (မိန်းမ မလာရ ။ ပေါက်ကရ ဓါတ်ပုံများရှိသည်)
အရေမရ အဖတ်မရ အတင်းပြော BLOGများ
●အရေမရ အဖတ်မရ နအဖ အတင်းတွေကို ပြောရင်း ဒီမိုကရေစီ ရယူသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ (ခေါင်းမရှိကိုယ်)
●Zombie တွေကို နဖားကြိုးထိုး ဆရာကြီး လုပ်နေတဲ့ အခွင့်အရေးယူတော်တဲ့ စစ်သားကြီး (ကိုချိုကျိုး)
●ဥာဏ်မရှိလို့ ကျော်ဇောနေတဲ့ Zombie များရဲ့တပည့် (မောင်ထိုင်း )
●အမှန်ကိုဂရုမစိုက် အတိုက်အခံတွေကို ဝေဖန်ရင် ဖင်ပိတ်ငြင်းမဲ့အဖွဲ့ (ဒေါင်းငြင်းအဖွဲ့)
●အတိုက်အခံတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ် တွေးဖို့ကြောက်ပြီး ညစ်နေသူ (ကိုလူညစ်)
●မထူးမှန်းသိရက်နဲ့ နအဖအတင်းကို နှစ် ၂၀လုံးလုံး မမောတမ်း အတင်းပြောနေတဲ့ (ကို အတင်းစေးထူး)
●သမိုင်းစာအုပ်ထဲက စာသားတွေနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်ကို အမေလိုမြတ်နိုးတဲ့ (ညီမလေး ကော်ပီပေါက်စ)
●အရှက်၊ သိက္ခာ၊ ဦနောက် သုံးခုချို့တဲ့နေတဲ့ (ကိုဒုက္ခိတဒေါင်း)